ကျွန်တော်တို့ နှင့် လျှပ်စစ် မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ…။ (စကားဝိုင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်တို့ နှင့် လျှပ်စစ် မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ…။ (စကားဝိုင်း)
ကျွန်တော်တို့ နှင့် လျှပ်စစ် မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ…။ (စကားဝိုင်း)
Posted by စာ ကြမ်းပိုး on Jul 14, 2014 in Creative Writing, Editor's Choice, Education, Environment, How To.., Ideas & Plans, Society & Lifestyle | 58 comments
သတင်းဖတ်ပြီး ရင်ထုမနာဖြစ်ရပုံ များဗျာ။
ယနေ့ခေတ် လူသားများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြစ်ပါသည်။
အနည်းဆုံး ဖုန်းအားသွင်းဖို့တော့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုပါသည်။
ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုဖို့အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုပါသည်။
ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုပါသည်။
တီဗီ ကြည့်ဖို့အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုပါသည်။
အ၀တ်အစားများ မီးပူတိုက်ဖို့အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုပါသည်။
ရေခဲသေတ္တာ၊ အဲကွန်း၊ ပန်ကာ၊ အ၀တ်လျှော်စက် စသည့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ
ဤမျှ အသုံးဝင်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်က လူသားများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို
အခုတလော သတင်းစာ ဂျာနယ်များတွင် ဓါတ်လိုက်သေသောသတင်းတွေ သတိမပြုမိပဲ
အဆိုးဆုံးက ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျလို့ လူသေသည့် သတင်းတွေ များလာနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လှည်းတန်းမှာ ၂ ယောက်၊ မြောက်ဥက္ကလာမှာ ၁ ယောက်၊ လှိုင်သာယာမှာ ၃ ယောက်၊
ပေါင်း ၆ ယောက် ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ခေါင်းပေါ်တွင် သွယ်တန်းလျက်ရှိနေသော ဓါတ်ကြိုးများက
အချိန်မရွေးပြတ်ကျနိုင်သည် ဆိုသောအခါ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူက ကာကွယ်ပေးမှာပါလိမ့်…။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဆိုပါ ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုများကို လျှပ်စစ်မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ ဟု နာမည်ပေးချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ၏ နေ့စဉ်ဘ၀ လှုပ်ရှားမှုများသည် စစ်မြေပြင် မဟုတ်ပါပဲလျက် အချိန်မရွေး
အသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်သည် ဆိုသောအခါ ထိုပြသနာကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမှာပါလိမ့်။
မနက်မိုးလင်း ထမင်းချိုင့်လေးဆွဲပြီး အလုပ် သွားသည့် သမီးငယ်လေးတစ်ယောက်
ညနေခင်း အိမ်ပြန်မရောက်မချင်း မိအိုဖအိုကြီးတွေက ပူပန်နေကြရပါပြီ။
ငါ့ သမီးလေး…၊ ငါ့ သားလေးများ ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျပြီး အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရရှာပြီလား…။
ငါ့ဇနီး များ ဈေးဝယ်နေရင်း ခေါင်းပေါ် ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျ နေမလား…။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် အလုပ်ဆင်းနေရသော်လည်း စစ်မြေပြင်ကို စစ်တိုက်ထွက်သွားသော
စစ်သားများလို အချိန်မရွေး အသက်အန္တရာယ်နှင့် ကြုံပြီး သေပွဲဝင်သွား ရနိုင်ပါသည်။
အခု မိုးရာသီ အတွင်း လျှပ်စစ်ကြောင့် သဆုံးသူ ၃၀ ကျော်ရှိလာနေပြီ ဆိုသည့် သတင်းကလည်း
ကျွန်တော်တို့ မသိကျေးကျွန်း ပြုမထားနိုင်ကြတော့ပါ…။
အဆိုပါ ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုများအတွက် မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိပါသနည်း…။
အခုအချိန်အထိတော့ ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုများအတွက် ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး
အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်သွားသည့် ၀န်ကြီး ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုး မဖတ်ခဲ့ရသေးပါ…။
သေသူတစ်ဦးအတွက် ငွေ ၅ သိန်း ခန့် လျော်ကြေးပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးကြစတမ်းလား…။
မီးမကြာခဏ ပျက် ပြီး ရုတ်တရက် မီးပြန်လာရာမှ မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ် တတ်ပါသေးသည်…။
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကြည့်နေရာမှ အရုပ်အသံ မကြည်လင်သဖြင့် အင်တင်နာ လှည့်မိရာက
EPC မှာ လုံးလုံး တာဝန်ရှိသည်ဟုတော့ မစွတ်စွဲလိုပါ…။
သို့သော် သည်ပြသနာတွေကို EPC က ဦးဆောင်ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟုတော့ ထင်မြင်မိပါသည်…။
EPC မှလည်း ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုများအတွက် တာဝန်ရှိသည် ဆိုပြီး တောင်းပန်တာမျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့ရပါ…။
‘‘ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုထဲမှာပဲ အခုလို ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး
ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်’’ဟု
ဒေါ်ညိုညိုသင်းက ပြောသည်7Days ဂျာနယ်က ဖေါ်ပြလာသောအခါ…။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ရပေတော့မည်…။
ဘယ်ကစပြီး ဘာကိုစလုပ်ကြမလဲ…။ စိုးရိမ်စရာကောင်းသော အခြေအနေတစ်ရပ်မို့
သည်စကားဝိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးဖြစ် ကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ နှင့် လျှပ်စစ်မိုးပျံမိုင်းဗုံးများ အမည်ရ စကားဝိုင်းပေါ့ခင်ဗျာ…။
လျှပ်စစ်မှ မီးလောင်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါသလဲ…။
လျှပ်စစ် သုံးစွဲရင်း ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပညာပေးသင့်ပါသလဲ…။
(အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သင့်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်)
အထူးသဖြင့် ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါသလဲ…။
(ချက်ခြင်း စီမံချက် ချ၍ ဆောင်ရွက်သင့်နေပါပြီ)
နားလည်သလောက် ၀ိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးကြစေချင်ပါသည်။
လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်မှုကို သင်တန်းဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနေသော ကိုစွယ်တော်ရွက် နှင့်
EP အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ဖြစ်သော ကိုထူးဆန်း တို့မှလည်း
အထူးဧည့်သည်များအဖြစ် ဤစကားဝိုင်းတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးထားကြပါသည်။
ထို့အတွက်လည်း ကိုစွယ်တော်ရွက် နှင့် ကိုထူးဆန်းတို့အား စာကြမ်းပိုးများမှ
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည် ခင်ဗျား။
ကိုစွယ်တော်ရွက်မှလည်း သူကျွမ်းကျင်ရာ နယ်ပယ် ဖြစ်သဖြင့် ပိုစ်တက်လာသည့်အခါ
ကွန်းမန့်များဖြင့် ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပေးသွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ရွာသူ ရွာသားများအနေဖြင့်လည်း ဒီစကားဝိုင်းမှာ ပါဝင်ကြဖို့
ကို စွယ်တော်ရွက် ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်လေးကို အရင် ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျလို့ လူသေရတာမှာ EPC (ရန်ကုန်ဆို YESB) မှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါပေသည့် ယနေ့ မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ကြိုးသွယ်စံနစ်မှာ အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး Protection အပိုင်း အားနည်းမှုတွေက ကြီးစိုးနေပါပြီ။
လုပ်ငန်းခွင်ကလူတွေကိုယ်တိုင် လိုက်နာရကောင်းမှန်းမသိတော့တဲ့ အခြေအနေပါ။
ဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ လို့ ပြောရင်လည်း ရမယ်ခင်ဗျ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမှာ လုပ်ငန်းသဘာဝကို နားမလည်တဲ့သူတွေ ရောက်နေရာကနေ
ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဘေးရောက်မှေးမှိန်ကုန်ကြတာကိုး။
အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေကနေ တကယ်မတတ်တဲ့ စာရွက်ပေါ်က ဘွဲ့ရတွေ
မွေးထုတ်ပေးလိုက်တာကလည်း တစိတ်တပိုင်းပါမပေါ့လေ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် NLD
လူငယ်ညီလာခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားခဲ့တာလေး ကိုဘဲ ချိတ်လိုက်ပါရစေ။
တာဝန်မသိတဲ့ သူတွေရဲ့ တာဝန်ခံမှုမရှိခံတာတွေကြောင့်
တိုင်းပြည်ဇောက်ထိုး ဆင်းခဲ့/ဆင်းနေ ရတာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ရွာထဲမှာပါ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါမည်လို့ ကတိပေးပါကြောင်း ကျေညာမောင်းခတ်လိုက်စေလို။
With respect Swal Taw Ywet.
ကို ထူးဆန်း ကလည်း အောက်ပါအတိုင်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဗျာ။
စာဂျပိုး တို့ ရေ..
တရားခံ ဘယ်သူလဲ ဟေ့လို့ ဆိုရရင် အများက တစ်နေရာထဲ လက်ညှိုး ၀ိုင်းထိုးကြမှာ ဖြစ်ပေမဲ့
ကျွန်တော့် အတွက် တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဖြစ်စဉ်များစွာလိုဘဲ မုန့်လုံးစက္ကူ ကပ်ဖြစ်စဉ်လို့
ယူဆလို့ တစ်ခုလောက်ဘဲ အတိုချုပ်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ preventive maintenace ဆိုတာ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိလာတဲ့ နေ့ ၊
ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာခံယူလာတဲ့ နေ့ ၊
အဲ့ဒီ့ အတွက်လည်း budget ထား နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထား ရှိလာတဲ့ နေ့ ၊ ထားလာတဲ့ နေ့ ၊
အဲ့ဒီ ကမှ တဆင့် အလွဲသုံးစားကင်းစွာ လုပ်လာတဲံ နေ့ရောက်မှသာ ဒါမျိူးတွေ မဖြစ်အောင်
ကာကွယ်လာနိုင်မယ်လို့ ဘဲ ပြောချင်မိပါတယ်ဗျာ။
ရေတိုပြောရရင် ဓါတ်ကြိုးအောက်က ရှောင် လျှောက်ကြပါလို့
ဓါတ်လိုက်နေတာ တွေ့ ရင် စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ ဘဲ လွှတ်ပေးထားလိုက်ပါ ။
ဘယ်နေရာကနေ ဓါတ်အားဖြတ်လို့ ရမလဲ ဆိုတာ သိရင် ဓါတ်အားဖြတ်နိုင်အောင်ဘဲ ကြိုးစားပါ ။
ကိုယ့် အိမ်မှာ ဆိုရင် ဘယ်နေရာကနေ ဓါတ်အားဖြတ်လို့ ရမယ် ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ထားပါ။
မတော်တဆ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ ရင် အမြန်ဆုံးသွားဓါတ်အားဖြတ်ပါ ။
နောက် ခါတော်မှီ အကြံလေးတစ်ခုတော့ ပေးချင်ပါတယ် ဗျာ။
ဂက်စ် ဈေးနုန်းတွေ မတရားတက်လာတော့ အိမ်ရှင်မ များ ဂါတ်စ်မီးဖိုတွေကနေ
လျှပ်စစ်မီးဖိုတွေဘက် လှည့်လာမယ် ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်မှာ တပ်သုံးမယ် ဆိုတဲ့ နေရာက
လျှပ်စစ်မီးကြိုးများသည် အဲ့ဒီ့ မီးဖို ရဲ့ ၀န်ကို ခံ နိုင်ရဲ့လားဆိုတာ တတ်သိနားလည် ကျွမ်းကျင်သူများကို မေးပြီးမှ သုံးစွဲကြပါလို့။
ကျနော် နားလည်သလောက် ဆိုရင် လျှပ်စစ်ဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ရင်းမြစ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။
ပိုလျှံတယ် လို့ ဇွတ်ပြောပြီး ရောင်းစားတာလည်း ရောင်းတာပေါ့။
မီးမလာတဲ့ မီတာခတွေ တိုးမြှင့်ကောက်ခံတာလည်း ကောက်ခံကြပေါ့။
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ခံဖက်က ရှိတဲ့ မိဘပြည်သူများဆိုတော့ ခံကြဗျားးးး
ဒါပေမဲ့ ရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ဘာလုပ်နေမှန်းမသိအောင်ကို ဒီနိုင်ငံမှာ
လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုက အားနည်းရုံမက ညံ့ဖျင်းတယ် လို့ ပဲ ပြောလို့ ရပါတယ်။
ရပ်ကွက်တစ်ခု တစ်ခု က ဓာတ်တိုင် တစ်ခု တစ်ခုကို ကြည့်လိုက်ပါဦးးး။
အမယ်ဘုတ်ရဲ့ သူ့ချည်ခင်နဲ့ သပွတ်အူက စပ်ကျတဲ့ သားသမီးတွေတောင် အဲလောက် မရှုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။
ရပ်ကွက်ထဲက လျှပ်စစ် ဝန်ထမ်းငယ်တွေကိုယ်တိုင် အိမ်တွေက ပိုက်ဆံပေးခိုင်းရင်
မီးလိုင်း ဓာတ်ကြိုးတွေကို ဟိုဘက်ပြောင်းချိတ်ပေးး ဒီဘက် ပြောင်းချိတ်ပေးလုပ်နေတာ ဆိုးပါတယ်။
သဘာဝဘေး အန္တရယ်ကျရောက်မှာထက် ခုချိန်မှာက လျှပ်စစ် အန္တရယ်ကို ပို အဓိက ထား ကာကွယ်ရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
သက်ဆိုင်ရာများ သတိပြုမိပါစေ။ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။
လျှပ်စစ်ဓါတ်ကြိုးတွေ ဟိုနေရာမှာပြတ်ကျ ဒီနေရာမှာပြတ်ကျနဲ့ သတင်းတွေကြားရရုံမကပါဘူး။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ မျက်မြင်ကြုံတွေ့ နေရတာ။
ဘယ်သူ့ ကို ယိုးမယ်ဖွဲ့ ရမလဲ။ ဗမာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကံကိုပဲ ပုံချရမလား ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ အသိဥာဏ်ပွင့်လင်းလာပြီမို့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကံကိုပဲ ပုံချနေဦးမှာတော့. . . မဟုတ်တော့ဘူးဗျ ။
ဒီတော့ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်။
ဒီလို ဒီလို ဓါတ်ကြိုးတွေ ပြုတ်ကျပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ အသက်တွေ ပေးနေရတာ. . .
ဒီလို အသက်တွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာတဲ့အထိ ဆိုးနေပြီဆိုတာတောင် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ကြည့်နေရင်…
ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကို သောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေလို့ ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပဲ ။
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနကနေ ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်အောင် . . ပြုပြင်ပေးပေါ့ဗျာ ။
သက်တမ်းလွန်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတွေ . . .
ခံနိုင်ဝန်မမျှတော့တဲ့ လျှပ်စစ်ကြိုးအဟောင်းအဆွေးတွေကို သေချာစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပေးနေပေါ့။
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေမရှိတဲ့အထိ /စိတ်ချလုံခြုံစွာ သွားလာလှုပ်ရှားလို့ ရနေတဲ့အထိ လုပ်ပေးနေရမှာပေါ့ ။
စစ်ဆေးမှုကလည်း သေချာဖို့ ထိရောက်ဖို့လိုသလို အစားထိုးပြင်ဆင်မှုကလည်း တိကျသေချာဖို့လိုပါတယ်။
ပြီးလျှင်ပြီးရော လုပ်နေကြရင်တော့ . . .အသေဆိုးတွေနဲ့ သေနေကြရဦးမှာပဲ ။
ဒီအတိုင်း အိပဲ့အိပဲ့ ဆက်လုပ်နေကြဦးမယ်
ဆက် သေပေးနေရဦးမှာပါပဲ ။
အခုဆိုရင် . . . မိုးလေးနည်းနည်းရွာ. . / လေလေးနည်းနည်းတိုက်တာနဲ့
သွားလာနေရတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ စိတ်ချလက်ချ မသွားရဲတော့ဘူး။
ဘယ့်နှယ်ဗျာ. . .တောရွာကလူတွေက မှောင်မှောင်မည်းမည်းအောက်မှာ
မြွေ ကင်း/ စစ်/ တို့မီး ရှို့မီးတွေ ကြောက်နေရတယ်။
အခု မြို့နေပြည်သူတွေကျတော့ လမ်းသွားရင်း ဘယ်အချိန် ကိုယ့်ပေါ်ဓါတ်ကြိုးပြုတ်ကျပြီး ဂန့် မလဲ စိုးရိမ်နေရတယ်။
ဟုတ်တယ် ဟုတ် ။
လျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုသူတွေကလည်း ကျသလောက် လစဉ် ပေးဆပ်နေကြတာပဲ။
ပြည်သူတွေဆီက ရယူဖို့ ပဲ ကြည့်နေမှာလားပေါ့။
ပြည်သူတွေဆီက ရသမျှယူပြီး စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝမှုလေးတော့ ပြန် မပေးဘူးလားးပေါ့။
တာဝန်ယူမှု ဆီရောက်အောင်သွားကြပါ သက်ဆိုင်သူတို့ ရာ. . ။
ဒီအတွက် . . . တာဝန်သိဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ် လုပ်ရမယ့်တာဝန်ကို သိပြီး . . .
တစ်ခုမေးလိုက်ချင်တာက. . .
အရင်အစိုးရ လက်ထက်အောက် တုန်းကလည်း. . .
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ မသေသင့်တဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ သေခဲ့ကြရတယ်။
အခု အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာရော. .
ဒီလိုပဲ သေနေကြရဦးမှာလား. . .
ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေက ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုဗျ ။
ဒီအတိုင်းကြီးတွေ ဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ရှက်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ပါဗျာ. . .။
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်လို့ ဆိုရာမှာလဲ –
တသက်လုံးတင်မက ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အထိတိုင်အောင် လျှပ်စစ်ကို အန္တရယ်မကင်းအောင်
သုံးစွဲနေကြရတာဟာ ဘယ်သူ့ချွတ်ယွင်းချက်လဲ ၊
ဘယ်သူ့အားနည်းချက်ကြောင့်လဲဆိုတာ စဉ်းစားဖေါ်ထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အများပြည်သူ အန္တရယ်မကျရောက်ရလေအောင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့
ဆေးဝါး တင်သွင်း/ထုတ်လုပ်တာတွေ၊ အစားအသောက် တင်သွင်း/ထုတ်လုပ်တာတွေမှာ
စည်းကမ်းတွေ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေ အသီးသီး သတ်မှတ်ထားသလိုမျိုး-
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်း/ထုတ်လုပ်တာတွေမှာလဲ စည်းကမ်းတွေ
စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေ စစ်ဆေးအရေးယူမှု့တွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီလို့ မြင်မိပါတယ်ဗျာ။
အစားအသောက်မှားရင် စားတဲ့သူပဲ ထိခိုက်ပါသဗျ..
အရည်အသွေးမမှန်တဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေသုံးနေရလို့ မီးလောင်ရင်တော့
ဘေးက မဆိုင်တဲ့သူတွေလဲ ထမင်းထုပ်စားရဖို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…။
အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်း/ထုတ်လုပ် မှု့ကို တားဆီးသင့်တာဖြစ်သလို…
တချိန်ထဲမှာပဲ အရည်အသွေးမီတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်း/ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ဖြူးတာကိုလဲ
အားပေးရမှာ လိုအပ်သလို ပံ့ပိုးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
တစ်ချိန်က ကစလ လို့ တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ ပြည်တွင်းထုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဟာ…
ဒီကနေ့ ဆိုင်မျိုးစုံမှာ ပေါပေါလောလောရနေတဲ့…
ပြည်ပကသွင်းလာတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အပေါစားအညံ့စားတွေထက်..
အရည်အသွေးပိုင်းမှာ အများကြီး သာလွန်တာကိုလဲ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ပိုညံ့တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ သုံးလာရတယ်ဆိုတာ…
အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူနေမှု့အဆင့် ပိုနိမ့်သွားတယ်လို့ တိုက်ရိုက်ဆိုလိုတာပါခင်ဗျာ..။
အစိုးရရဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကိုလဲ နားမယောင်ပါဘူး…
အစိုးရရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ ဆောင်ပုဒ်တွေကိုလဲ အားမကိုးပါဘူး…
ပြည်သူအပေါ် တာဝန်ရှိတဲ့ လက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့အစိုးရရဲ့
တာဝန်သိမှု့ ….. ဆိုတာကလေးကိုပဲ တောင့်တောင့်တတ ဖြစ်မိပါရဲ့ဗျာ….။
စာကြမ်းပိုး( ၅ )
ကြားရ နားဝမသက်သာပါလား ဟရို့ ..!!!
နွေမှာ မိုးမှာ ဆောင်းမှာ ဘယ်အခါခါ ဖြစ်ဖြစ် အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာ အန္တရာယ် ရှိနေတာက
လျှပ်စစ်မီးပဲဗျ ။ လူတွေက ဖြစ်မှသာ ဖြစ်ပြီပဲ ။ ကြောက်လား ဆိုတော့လည်း ကြောက်ပါတယ်ပဲ ။
အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် စည်းစနစ်တကျ သုံးသလား ဆိုတော့ မသုံးဘူး မဟုတ်ဘူး ။ မသုံးတတ်တာ ။
ဒီလျှပ်စစ် သုံးနေတဲ့သူတိုင်း လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ ရှိသလားဆို မရှိဘူး ။
ခလုပ်နှိပ်လိုက်ရင် မီးလင်းတာပဲလေ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ သုံးနေတာ ။ ဆိုလိုတာက လျှပ်စစ်နဲ့
ပါတ်သက်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဗဟုသုတ ပေးမှု အားနည်းနေတာ ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ
မဖြစ်သင့်တဲ့ မတော်တဆ မှုတွေ ထပ်ကာတစ်လဲလဲ ဖြစ်နေတာ ။
အဲ့ ဒါဆို နေ့စဉ် လျှပ်စစ်ကို တာဝန်ယူ ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ သူတွေကော လုံလောက်တဲ့ အတတ်ပညာ ပြည့်ဝရဲ့လား ။
သူတို့သုံးသွားတဲ့ လျှပ်ကာ ပစ္စည်းတွေ ( တစ်ချို့ဆို ဝါယာ နှစ်ချောင်း လိမ်ကျစ်ပြီး ဆယ်လို တိတ်ခေါ်မလား
တိတ်အကြည်လေးနဲ့ ပဲပတ်ပေးသွားတာ ) ကော ပြည့်ဝတဲ့လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား ။
ဒါတွေကို တရားဝင် စစ်ဆေးပေးမဲ့ အဖွဲ့ လုံလောက်အောင်ရှိရဲ့လား ။
နေရာတိုင်းမှာ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်အလိုက် စစ်ဆေးပေးသင့်တယ်။
စစ်ဆေးမှု ခံယူရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်း လက်ခံရဲ့လား ။ ပထမဆုံး လူတွေရဲ့ အမြင် ပြောင်းလဲသွားအောင်
အသိပညာပေးရမယ် ။ တာဝန်ရှိသူတွေက အချိန်ကာလ အလိုက် အသိပညာ ဖြန့်ဝေရမယ် ။
အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ လျှပ်စစ်သုံးစွဲသူများ လိုက်နာရန် ဆိုတဲ့ ဝါကြန့်ကြန့် စက္ကူတွေ လိုက်ဝေပြီး
မတန်ရင်ကာ ပိုက်ဆံ တောင်းသုံးနေဦးမယ် ။ ဘယ်အကြောင်းပြောလိုက်ပြောလိုက် ဒီဘူတာပဲ
ဆိုက်ဆိုက်နေတော့ ခက်တယ်ဗျာ ။
အစိုးရတစ်ဖွဲ့ လုံး ၀န်ထမ်း တစ်ဖွဲ့လုံး စုံလိုက် လဲလိုက်တာ ကောင်းမယ်ဗျာ ။
ဒီအချိန်မှာ အင်မတန်မှ သင့်တော်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆမိတဲ့
ကိုစွယ်တော်ရွက် ရဲ့ လျှပ်စစ်သတိ လျှပ်စစ်အသိ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို
ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ ရွာထဲမှာ တင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်
လိုအပ်တယ်ထင်လို့ ဒီပို့စ်ထဲမှာ ပြန် ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
“လျှပ်စစ်သတိ၊ လျှပ်စစ် အသိ”
ဟို တစ်ချိန်တုံးက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ “ သတင်းစာ ကိုင်ရင် ဓါတ်လိုက်တယ် ” ဆိုတဲ့စကားလေး မမေ့ကြသေးဘူးဟုတ်။
ဒီနေ့တွေမှာတော့ ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှု သတင်းတွေကို သတင်းစာကိုင်တိုင်းတွေ့နေရလို့
ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်မှု အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေချင်လို့ပါ။
ဓါတ်လိုက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ခန္တာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားတာကိုခေါ်တာပါ။
လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်စီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လူ့ခန္တာကိုယ်အတွင်း သွေးလှည့်ပတ်မှုရဲ့
အဓိကမောင်းနှင်သူဖြစ်တဲ့ နှလုံး ( Heart ) ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အသက်သေဆုံးစေသည်အထိ
အန္တရာယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လျှပ်စီးကြောင်းရဲ့ သဘောသဘာဝ ကို လိုတိုရှင်း ရှင်းပြပေးပါရစေ။
လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက် ( ၂ ) ခုဘဲ ရှိပါတယ်။
( ၁ ) က လျှပ်စစ်တွန်းအားပါ။ ဗို့အား ၄၀ ဗို့ ကျော်တာနဲ့ အသက် အန္တရာယ်ပြုနိုင်ပြီလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊
အိမ်တွေမှာ သုံးဘို့ လျှပ်စစ်က ပို့ပေးထားတာက ၂၂၀ ဗို့ပါ။စက်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်
၄၀၀ ဗို့အားပေးပို့ထားတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်၊ တြိသွင် ၀ါယာလေးချောင်းစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
( ၂ ) ကလျှပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားနိုင်မယ့် ပတ်လမ်းပြည့် ဖြစ်ဖို့ပါ။
တွန်းအားရှိနေပေမယ့် ပတ်လမ်းမပြည့်ရင် လျှပ်စစ်မစီးနိုင်ပါဘူး၊
ဓါတ်ကြိုးပေါ်နားနေတဲ့ငှက်တွေ ဘာ့ကြောင့်ဓါတ်မလိုက်တာလဲ??? ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့ အဖြေပါ၊
စာဖတ်သူရဲ့အိမ်မှာ မီးဖွင့်ဘို့ ခလုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် ပတ်လမ်းပြည့် ဖြစ်သွားပြီး
လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြစ်လာကာ မီးလင်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စီးကြောင်းရဲ့သဘာဝ ကိုသိပြီဆိုရင် လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်မှုအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေနိုင်မယ့်
“ဆောင်ရန်” လေးတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။
လိုအပ်ချက် ( ၁ ) က လျှပ်စစ်တွန်းအားရှိရမယ်ဆိုတော့ကာ တွန်းအားမရှိရင်
ဓါတ်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ခလုတ်ပိတ်ပြီးမှ ပလပ်ထိုးဗျာ၊
ပြီးမှ ခလုတ်ပြန်ဖွင့်၊ ကိုယ်ပလပ်ထိုးနေချိန်/ ဆွဲဖြုတ်နေချိန် အဲဒီပလပ်ပေါက်မှာဓါတ်အား
မရှိအောင် လုပ်ထားရင် အန္တရာယ်ကင်းမှာပေါ့။ ထပ်ပြောပါဦးမယ် လျှပ်စစ်တွန်းအားမရှိရင် လျှပ်စီးကြောင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့အများစုရဲ့ အားနည်းချက်လေး နဲနဲထောက်ပြခွင့်ပြုပါ။
ပလပ်ပေါက်တိုင်းမှာ အဲဒီပလပ်ပေါက်ကိုထိန်းချုပ်မယ့်ခလုတ် ( Switch ) တတ်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ခလုတ်မလိုပါဘူး ဒီအတိုင်းဆွဲဖြုတ် ပလပ်ထိုး လုပ်ရင်လည်းဖြစ်တာဘဲ” ဆိုပြီး
ခလုတ်မတတ်ဘဲသုံးတဲ့၊တတ်ထားတဲ့ခလုတ်ကို အသုံးမပြုဘဲနေတဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်၊
ပလပ်ပေါက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ ခလုတ်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီခလုတ်သည်
ဓါတ်လိုက်နိုင်သောကြိုး( တနည်း ) အများအခေါ် အပူကြိုး ( Live Wire) ကိုဖြတ်ထားပေးဘို့လည်း
အရေးကြီးပါသေးတယ်၊ အအေးကြိုးကိုသွားဖြတ်ထားမိရင် ခလုတ်ပိတ် ( switch OFF ) ထားပေမဲ့
ပလပ်ပေါက်မှာ ဓါတ်အားရောက်နေမှာပါ။ အခုလူသုံးများလာနေတဲ့
ထပ်ချဲ့ခလုတ်ခုံ ( Extension Cable with Switches ) မှာ ကျတော့ထိပ်ဆုံးမှာ
နှစ်ချောင်း ပလပ် (2Pins Plug ) သုံးတာဆို အပူကြိုး အအေးကြိုးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ခြေ
ပိုရှိနေပါတယ်။ မြေဓါတ်ချကြိုး ( Earth Wire ) ရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ သုံးချောင်းပလပ်နဲ့
ပလပ်ပေါက် (3pins Plug and Socket ) ကို သုံးရင်တောင် အနည်းဆုံး အပူကြိုး အအေးကြိုး
ပြောင်းပြန်တတ်မိခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်။3pins Plug တွေရဲ့ Earth Pin
ကို ချိုး၊ကွေး၊ဖြုတ် လုပ်ပြီး နှစ်ချောင်းသုံးပလပ်ပေါက် (2Pins Socket ) မှာ သုံးနေကြသူများဆင်ခြင်နိုင်ဘို့ပါ။
လိုအပ်ချက် အမှတ် ( ၂ ) ပတ်လမ်းပြည့် ( Close Circuit ) ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။
ဓါတ်လိုက်မှု အများစုမှာ MEPE / ( YESB )ကပေးတဲ့ အပူကြိုး (Live Wire ) နဲ့မြေဓါတ်( Ground ) ကြားထဲမှာ
လူရောက်သွားပြီး ပတ်လမ်းပြည့်ဖြစ်-လျှပ်စစ်စီးဆင်း-ဓါတ်လိုက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေဓါတ် ( Ground ) ဟာ
နေရာတကာမှာရှိနေနိုင်တဲ့ အအေးကြိုးဖြစ်နေလို့ပါ။ နံရံမှာရှိတယ်၊မျက်နှာကျက်မှာရှိတယ်။ရေစိုနေတဲ့နေရာတွေမှာ
လျှပ်စစ်က အလွယ်တကူ ပိုစီးဆင်းနိုင်တယ်။ သမံတလင်းဆို လျှာထိုးကြမ်းခင်းထက်ပိုအန္တရာယ် ရှိပါတယ်။
လျှပ်စစ်ခုခံမှု ( Resistance ) နည်းပါးရင် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ခန္တာနဲ့ မြေဓါတ်ရဲ့ကြားထဲမှာ လျှပ်စစ်မစီးနိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေ ထားထားပေးလိုက်ရုံလေးပါခင်ဗျ။
ထမင်းဟင်းချက်တဲ့လျှပ်စစ်မီးဖိုနားမှာ၊ လျှပ်စစ်မီးပူတိုက်မယ့်နေရာ၊ တီဗွီ၊ပန်ကာ၊ဖုန်းချာဂျာ
သစ်သားခုံလေးရိုက်၊ရာဘာခြေသုတ်ဖုံလေးချပေးထားတာနဲ့တင် ခြေထောက်နဲ့ မြေဓါတ်အကြား
အခုခေတ်မှာ လွယ်လင့်တကူဝယ်လို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ အ၀တ်လက်ခုအိတ်လေးတွေစွပ်ပြီးသုံးသင့်ပါတယ်။
“မြွေကိုက်လျှင်ဆေးရှိသည်၊ ဓါတ်လိုက်လျှင်ဆေးမရှိ ”ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို အမြဲ သတိရနေစေချင်ပါတယ်။
( ၁ ) ခလုတ်ပိတ်ပြီးမှ ကိုင်တွယ်ပါ။
( ၂ )မြေဓါတ်မှကင်းလွတ်နေပါစေ။ ဆိုတဲ့ အချက်လေး ၂ ချက် ထဲကိုဘဲ သိထားပြီး အသုံးချပါ။
မိမိတင်သာမက မိမိပါတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လျှပ်စစ် အသိ၊ လျှပ်စစ် သတိလေးထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
ဒါကတော့ ကိုစွယ်တော်ရွက်ရဲ့ “စွယ်တော်ရွက်ရဲ့ဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံးပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ဆောင်းပါး” ပို့(စ) လေးပါ။
အခုအချိန်မှာ အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ပညာပေးဆောင်းပါး ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီပို့စ်နဲ့ အတူ ဖေါ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုစွယ်တော်ရွက်ရဲ့ မူရင်းပို့စ်ကို အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်ကို သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
ဓါတ်ကြိုးတွေပြတ်ကျတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Facebook ပေါ်က Kyaw Oo ရဲ့ပို့စ်လေးကို
ကိုစွယ်တော်ရွက်က ကျွန်တော်တို့ဆီ ပို့ပေးလာပါတယ်ဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး။
ဓါတ်ကြိုးပြတ်လို့ ပြည်သူတွေ သေသွားရပြန်ပါပြီ ။
လမ်း သွားရင်တောင် အပေါ်မော့ ကြည့် နေရတယ် ။
အဲဒီအတွက် အရင်တုန်းကတော့earth ring and earth bar တွေတတ်ထားပါတယ် ။
safety အတွက်ပါ ။ ဘာမှလည်းမခက်ပါဖူး ။
အဲဒါက မီးလာတဲ့ ဖက် ဓါတ်တိုင်မှာ တပေ နှစ်ပေ အကွာမှာ ကြိုးပြတ်ကျရင် အရင် ထိဖို့ 
သံချောင်းလေးတတ်ထား တာပါ။ အဲဒီ သံချောင်းလေးကို မြေကြီး က အပ်ကြိုးနဲ့ ဆက်ထားတာပါ။
ဘယ်လိုကာကွယ်လဲဆိုတော့ မီးကြိုးပြတ်သွားတာနဲ့ အဲဒီကြိုးက အပ်ချထားတဲ့သံချောင်းကိုထိပြီး
မြေကြီးထဲကို လျပ်စီး တွေကို earth ကြိုး ကတဆင့် အများကြီးစီးသွားပါတယ် ။ အဲတော့ 
အရင်းမှာရှိတဲ့ circuit breaker ဖြစ်ဖြစ် ဖြူး ဖြစ်ဖြစ် ပြုတ်သွားပြီး အန္တာ၇ယ် မရှိတော့ ပါဖူး။
ဒါတွေကို လျပ်စစ်ဌာနကတတ်ကိုတတ်ရမှာပါ ။
အများဆုံးကုန် ဓါတ်တိုင် တတိုင် နှစ်သောင်းပေါ့ ။ ပြည်သူတွေကို စေတနာရှိရင်ပေါ့ ။
ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျလို့ သေနိုင်တာ လူတိုင်းပါ ။ လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ အမျိုးတွေ ပါ ပါနိုင်တယ် ။ လျပ်စစ် အန္တာ၇ယ် ကင်းကြပါစေ ။
earth bar တပ်ထားတဲ့ ဓါတ်တိုင်ပုံလေးတင်ထားတယ် ။
တာဝန်ရှိသူများ ရှက်တတ်ပါစေ ။
ကိုယ့် ကြောင့် သေရင်ကိုယ်လဲတာဝန်မကင်းပါ ။
ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုမှု အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ကဲ…ဒီပို့စ်ကို ဖတ်နေသူ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အမြင်အတွေးတွေကိုလည်း
ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့
စာဂျပိုး ( ၃ ) ပြောသလို….
အဲ့လိုပဲ..ပြောလိုက်ချင်တော့တယ် .. ။
ဒီနိုင်ငံမှာက…မသေသင့်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ …သေနေတာတွေ…မရပ်သေးဘူးလား.. ။
ရင်နာလွန်းလို့ ပါ.. ။
တိုင်းပြည်ကို…. ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ ..အအပ်ခံ( တာဝန်ပေးခံ)ထားရတဲ့ သူတွေဆီက…
ဘယ်လိုတွေ ကာကွယ်ပေးဖို့ စီမံမလဲ??
သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ဆိုင်ရာ အလိုက် ချမှတ်ထားတဲ့……………..
စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဘယ်လောက် ရှိလဲ ???
မေးတဲ့ လူသာ လဲ သွားတော့မယ်။
သေတဲ့သူတိုင်းကို တစ်ယောက် ၂၃ သိန်းစီထိုင်ပေးနေတော့မလားးး
အစိုးရမကောင်းပြောရင်သာ အဘချစ်တွေက နာတတ်ကြတာ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး စွမ်းအင်လို့တွေးရမလား
လျှိုဝှတ် လူသတ်သမားလို့ တွေးရမလား
ကိုယ်မကျူးလွန်ရဘဲ ဘုမသိဘမသိသေနိုင်တာတွေ အများကြီး
ဓါးနဲ့ ခုတ်သတ်ခဲရလို့ သေနိုင်တယ်
ဖလက်ဖောင်း အပေါက်ထဲ ကျွံကျပြီး
အိမ်ဖော်လုပ်ရင်း နှိပ်စ်က်ခံရလို့ သေနိုင်တယ်
ဆိုးဆေးတွေ ဆေးဝါးအတုတွေ အရက်တုတွေ
မသန့်ရှင်းသော စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ သေနိုင်တယ်
ဘုမသိ ဘမသိ သေနိုင်တယ်
ငါတို့ လူလိုမနေ ရတာလဲ
သစ်ရွတ်လို တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ နေခဲ့ရပြီ ။
(Credit to ခက် သီ)
အနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တန်ဖိုးမရှိ ဆုံး က လူ့ အသက်ပဲလား??
လှူကြ.. လှူကြ…။ စပါးနဲ့တန်းတူများအောင်… စေတီတွေဆောက်လှူကြ..။
အုပ်သားပြီးတော့.. အင်္ဂတေသား..။ အင်္ဂတေသားပြီးတော့.. င်္ထုးသား..။
ကျွန်မတို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့ Safety First ဆိုပြီး မိုးရာသီရောက်တာနဲ့ အလုပ်ထဲလာရင် Safety Boot, ဦးထုတ်၊ လက်အိပ်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ အကျီလက်ရှည် ပါရမယ်လို့ တင်းကြပ်တဲ့စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ်။
လှည်းတန်းဈေးမှာ ဈေးသွားဝယ်ရင် အဲဒီဝတ်စုံဝတ်သွားရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ် ..
မိုးရာသီ လယ်တောထဲစီးတဲ့ လည်ရှည်ဖိနပ်စီးတာလဲ ကာကွယ်နည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..
မေး – လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် သမားများအတွက် လိုက်နာရန် safety precautions များကို ဖေါ်ပြပါ။
ဖြေ – ရာဘာ လက်အိတ်များ၊ ရှူးဖိနပ်များ၊ ဖျာများ အသုံးပြုရမည်။ ဤနည်းဖြင့် မြေပြင်နှင့် လူ မထိဘဲ ဓါတ်လိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
– ဓါတ်အားလိုင်းများ တွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ ရှိ၊ မရှိ မသေချာသေးဘဲ မိန်း ခလုတ် ကို မတင်ပါနှင့်။ (သို့) ဓါတ်အားလိုင်းများအား ကိုင်တွယ်၍ အလုပ်လုပ်နေစဉ် မိန်းခလုတ်ကို သေချာစွာ ချထားရမည်။
– အလုပ်မစတင်မီ မိမိလုပ်ကိုင်ရမည့် အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော သီအိုရီ ဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကြိုတင် စုဆောင်း ပြင်ဆင် ထားရမည်။
မေး – လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပေါ် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက် နိုင်သနည်း။
ဖြေ – အသက်ရှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ သွေးတိုးနှုန်း ကျဆင်း အားနည်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အရည်ကြည်ဖုများထ ခြင်း၊ အဆိုးဆုံးအနေဖြင့် နှလုံးခုန် ရပ်ဆိုင်းခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မေး – လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက် ခံရသူများကို ပြုလုပ်ပေးရမည့် ရှေးဦးသူနာပြု နည်းလမ်းများကို ဖေါ်ပြပါ။
ဖြေ – ရှေးဦးစွာ ဓါတ်လိုက်ခံရသူကို လျှပ်စစ်ဓါတ် မလိုက်နိုင်အောင် မိန်းခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်ရမည်။ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓါတ်နှင့် ဝေးရာသို့ မိမိကိုယ်တိုင် ဓါတ်မလိုက်စေရန် သတိထား၍ လူနာကို ဆွဲယူရမည်။
– လူနာ၏ ဖိနပ်များ၊ အဝတ်များကို ချွတ်ပစ် (သို့) ချောင်အောင် လျော့ပေးရမည်။ ထို့နောက် အအေးမမိစေအောင် နွေးထွေးစွာ ထားရမည်။
– အကယ်၍ လူနာအနေဖြင့် အသက်ကောင်းစွာ မရှုနိုင်သေးပါက artificial respiration (အသက်ကူ အားရှုနည်း) ပြုလုပ်ပေးရမည်။ အရိုးရှင်းဆုံး အသက်ကူ အားရှုနည်း (artificial respiration) မှာ ပါးစပ်ခြင်း တေ့ပြီး လေမှုတ်သွင်းပေးခြင်း သည် အရိုးရှင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဖီလင်အောက်တာလေးတော့ ကြုံတဲ့ပိုစ့်မှာ ၀င် ရင်ဖွင့်လိုက်ဦးမယ်…
တစ်လောက ကေဇီရဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင် ပိုစ့်နဲ့ ရွှေညာသားရဲ့ ပိုစ့်လေးတွေမှာ ကွန်မင့်လေးတွေရေးပြီး ဆပ်မစ်လုပ်လိုက်တယ်..။
ပြီးတော့ အခြားဟာတွေလုပ်နေရတာနဲ့ အဲသည်ပိုစ့်တွေလဲ ပြန်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး…
ပြန်လဲကြည့်ရော ကိုယ် မန့်ထားတာ မရှိဘူး…
ကိုဘလက်နဲ့ ကိုမိုက်ပြောတာတော့ ကိုယ့်ကွန်မင့်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီးမှစိတ်ချရတယ် ဆိုပဲ…။
အဲဒါ အခု ဒီပိုစ့်မှာတော့ ဓါတ်လိုက်ခံရသူကို ထမ်းပြီး ဆေးရုံပို့ပေးဘူးတဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်လဲ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဓါတ်လိုက်ခံရပြီး မသေလို့ ကျန်နေသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဆက်ဆက် ကွန်မင့်လာရေးပါဦးမယ်..။ အခု အချိန်မရသေးလို့ စရံသတ်ထားတာ..
အဓိက ( ၂ ) ချက် မြင်တယ် ။
အရင်းစစ်လိုက်ရင် ၊ ပိုက်ဆံ မရှိတာ / ဆင်းရဲတာက အဓိကပါ ။
အပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေ ။
EPC က အင်ဂျင်နီယာတွေလဲ ၊ ဘယ်မသိဘဲနေမှာလဲ ။
သိလွန်းလို့ ၊ သိ သိ သိ နှင့်တောင်မြည်နေမှာ ။
ပိုက်ဆံ မရှိဘဲ ၊ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး ။
ဒါကြောင့် ၊ မီတာခတွေ အနဲဆုံး ၂ ဆ လောက် တိုးကောက်သင့်တယ် ။
အဲ မီတာခတွေ နဲနဲ သက်သာချင်ရင်တော့ ၊
ရေအားလျှပ်စစ် ဆည်တွေ / စီမံကိန်းတွေ အမြန်ဆုံးလုပ်ပါ ။
( ကြုံလို့ပြောရရင် ၊ မြစ်ဆုံ ဆည်ကြီးလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်စသင့်နေပြီ )
ကြုံလို့ထပ်ပြောရရင် ၊ သြဇီက ဓါတ်တိုင်က ဓါတ်ကြိုးတွေ မှာ Insulation အကာ အုပ်ထားတယ် ။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ ဓါတ်တိုင်က ဓါတ်ကြိုး ပြတ်ကျလဲ ၊ ဓါတ်မလိုက်ဘူး ။
တောထဲက ၊ တစ်မြို့ နှင့် တစ်မြို့ ဆက်တဲ့ မဟာ ဓါတ်အားလိုင်းတွေတောင် ၊
Insulation အကာ အုပ်ထားရတယ် ။ ဒါ ဥပဒေ ။
တောထဲမှာ ဓါတ်ကြိုး ပြတ်ကျပြီး လူသေမှာစိုးလို့ မဟုတ်ဘူး ။
ဓါတ်ကြိုးက သစ်ပင်ခြောက် / အမှိုက်ခြောက်ပေါ် ပြတ်ကျပြီး ၊
တောမီးလောင်မှာ စိုးလို့တဲ ။ ဥပဒေ ထုတ်ပြီး တားလိုက်တာ ။
လိုရင်းကတော့ ပိုက်ဆံ ဘဲ ။ ချမ်းသာ အောင်လုပ် ။
ချမ်းသာ ရင် ၊ ကျွဲကူး ရေပါ အကုန် မြင့်လာမှာဘဲ ။
မြန်မာပြည်ထဲကိုသွင်းတဲ့ ပစ္စည်း ( လျှပ်စစ်တင်မကဘူး အားလုံး ) တွေရဲ့ ၊
စံ သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြဋ္ဌာန်းပြီး ၊ ဥပဒေနှင့် ကာကွယ်ပေးပါ ။
အရည်အသွေး မမှီတဲ့ Sub Standard ပစ္စည်းတွေ
က ။ ပေးမသွင်းနှင့် ။
ခ ။ ပေးမသုံးနှင့် ။
ဥပမာ ။ ။ မြန်မာပြည်ထဲကို တရုတ်ပြည် ကုလားပြည် စသဖြင့်က ဝင်လာတဲ့ ၊
Medicine သောက်ဆေး ထိုးဆေးတွေဆိုရင် အရည်အသွေး မမှီဘူး ။
ပုံမှန် ဆေးတစ်လုံး 100mg တိုက်ရမယ့် နေရာမှာ ၊
တရုတ်ဆေး ဆိုရင် ဆေးနှစ်လုံး 200mg တိုက်နေရတယ် ။
ဒီလိုပြောလို့ တရုတ် ကုလား ကို ၊ မုန်းအောင်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ။
ဒီလိုပြောလို့ တရုတ် ကုလား ကို သွား မုန်းနေရင် ၊ ဒီလူ ငတုံး ။
တကယ်က ၊ အရည်အသွေး မမှီတဲ့ Sub Standard ပစ္စည်းတွေ ၊
ကိုယ့် တိုင်းပြည်ထဲ မဝင်အောင် ကာကွယ်ရမှာက အစိုးရ တာဝန် ။
လက်ရှိ အစိုးရက သောက်သုံးမကျလွန်းလို့သာ ၊
အခုလို မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာ ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းကအစ ၊
စံမမှီ အရည်အသွေး မမှီတာတွေနှင့် ဗုံးဗေါလအော ဖြစ်နေတာ ။
တကယ့် ရေရှည် ဆိုးကျိုးက ၊
အဲဒီလို စံမမှီ အရည်အသွေး မမှီတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဈေးပေါပေါ နှင့် ပေးသွင်းတာဟာ ၊
တကယ့် စံမှီ အရည်အသွေးမှီတဲ့ ပစ္စည်းထုတ်တဲ့သူတွေကို သတ်တာဘဲ ။
အခုဆို စံမှီ အရည်အသွေးမှီ ကစလ မီးကြိုး ကို ဘယ်နားသွားရှာရမလဲ ။
သွားကြည့်လိုက်ရင် ၊ ဘာ အာမခံချက်မှ မရှိတဲ့ တရုတ်ကြိုးဘဲ ရှိတော့တယ် ။
အဘတို့ သြဇီမှာလဲ ၊ တရုတ် ပစ္စည်းက ၇၅ % လောက်ပါဘဲ ။
ဒါပေမယ့် သြဇီ အစိုးရက သူ့အလုပ် သူလုပ်တယ် ။
၁ ။ သြဇီ ရဲ့ FDA လို့ အဖွဲ့က သူ့စံ နှင့် ကိုက်ညီမှ ခွင့်ပြုချက် ရပြီး သွင်းရတယ် ။
၂ ။ Instruction ၊ Ingredients တွေ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားရတယ် ။
၃ ။ တာဝန်ခံ တင်သွင်းတဲ့ သြဇီ ကုမ္ပဏီ နာမည် ရေးထားရတယ် ။
( တစ်ခုခု ဖြစ်လို့ကတော့ အဲဒီ တာဝန်ခံတဲ့ သြဇီ ကုမ္ပဏီ လျော်ပေတော့ဘဲ )
ဒီနှစ်က.. ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့.. အခြောက်သွေ့ဆုံးနှစ်တခု..။
ဒီလသိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းမှာ.. ကိုလိုရာဒိုရေကို ခွဲဝေသုံးစွဲကြတဲ့.. အကြောင်းနဲ့.. ဂရပ်ဖ်ပုံတွေပါတယ်..။
ရေချိုတွေမတရားခန်းကုန်သမို့.. ဟူးဗားရေကာတာဆည်ထားတဲ့.. အိုင်.. (လိတ်ခ်မိ)ကရေတွေ မတရားကျကုန်တဲ့အကြောင်းနဲ့.. လပ်စ်ဗေးဂတ်က.. ရှယ်ပိုက်ကြီးဖောက်ပြီး ရေချိုတွေဆွဲချဖို့ လုပ်နေတဲ့အကြောင်းပါတယ်..။
ကမ္ဘာ့သက်တန်းအကြာဆုံးမြစ်ကြီးတစင်းခမြာ… မဟီကိုပင်လယ်ဝထဲထွက်တော့.. ရေတစက်တောင်မရှိတော့…။ (ဓါတ်ပုံအရတော့.. ချောင်းလိုလို.. သဲပြင်ကလေးတခု)
လပ်စ်ဗေးဂတ်၊ ဆန်ဖရန်နဲ့..အယ်လ်အေမြို့ကြီးတွေအပါအ၀င်.. ကယ်လီဖိုးနီးယားက..လယ်သမားတွေ.. ရေချိုတွေယူသုံးလိုက်ကြတာလေ..။
ဘေးထွက်အဖြစ်.. လျှပ်စစ်တွေအချောင်ရသေး.. ။
ရေချိုတွေရဲ့.. မူလဘူတ.. ရေခဲနှင်းခဲ…တွေလည်း.. မထိမ်းထားနိုင်ပဲ..ပျော်ကျကုန်ပြီ…။
.. ဘေးထွက်လျှပ်စစ်ယူသုံးကြ.. ရယ်… လို့.. ။ :MRGREEN:
အဘဖေါနားကပ်မန့်လို့ရပါ့မလားမသိ။ ကိုးနတ်ရှင်ကိုမေတ္တာပို့ရင်းနဲနဲထောက်ပါ့မယ်။ လျှပ်စစ်အင်ယာတွေ သိပါတယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့တာပါ။ မိုးကျရွှေကိုတွေက အထက်ကကျလာ စီမံခန့်ခွဲနေလေတော့ အကုန်ပျက်ကုန်တော့တာပါ။ အရင်က EPC က မီးသွယ်ရင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန EI ကစစ်ဆေးတယ်။ ခွင့်ပြုမှ မီတာချိတ်ခွင့်ရ မီးလွှတ်ပေးတယ်။ Check and Balance ကောင်းခဲ့တယ်။ အခု အကိုကြီး ညီလေးတွေလုပ်လိုက်တာ မှာ တကယ်အတိအကျ မစစ်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤသို့……
ဓာတ်ကြိုးဖယ်ရှားရာမှ တောင်ဥက္ကလာပတွင် ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အတွင်း ယခုလ ၉ရက် မွန်းလွဲ ပိုင်းက မြေတူးစက်နှင့်မလွတ် ကင်းသည့်ဓာတ်ကြိုးကို ဖယ် ရှားရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ယခုလ ၉ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၄) ရပ်ကွက်သုမင်္ဂလာလမ်း နန္ဒဝန် ဈေးရှေ့တွင်နေသော စည်ပင် နေ့စားဝန်ထမ်း (လမ်းတံတား အဖွဲ့) ကိုကျော်မင်းအေး အသက်(၂၁)နှစ်သည် အဆိုပါ ဈေးရှေ့၌ရေမြောင်းမှဆယ်ယူ ထားသောမြေများကို မြေတူး စက်ဖြင့်သယ်ယူစဉ်မြေတူးစက် မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးနှင့် မလွတ်သဖြင့်ကိုကျော်မင်းအေး က မြေတူးစက်ပေါ်တက်ပြီး ဓာတ်ကြိုးကို ဖယ်ရှားရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့မရဲစခန်း က သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁၃/ ၂ဝ၁၄ ဖြင့်အရေးယူထား သည်။
FB က ကူးတင်လာတာပါ။
အခုတလော ရန်ကုန်မှာ လျှပ်စစ်မီးဝါယာကြိုးတွေ ပြတ်ကျ
ပြီး လူတွေဓါတ်လိုက်သေတာ မကြာခဏတွေ့ရတယ်။
ပြတ်ကျမီးကြိုးဟာ overhead line(ပိုမြင့်တဲ့နေရာက
ဓါတ်အားများတဲ့ ကောင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်း)လား ဓါတ်တိုင်ကနေ အိမ်ကိုသွယ်တဲ့
service ကြိုးတွေလားတော့ သေချာမသိရပါ။
ဘာကြိုးပဲ ပြတ်ကျကျ လျှပ်စစ်ဌာနမှာတာဝန်အရှိဆုံးပါ။
စနစ်ကျနပြီး အများပြည်သူအန္တရာယ်မဖြစ်အောင် လျှပ်စစ်ဥပဒေတွေ စံသတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားပါ။ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၅ မှာဆိုရင်
overhead lineအတွက် ဆွဲအားခံနိုင်ရည်ဟာ 1237lb,
service lineအတွက်ဆို 816lb,အသုံးပြုဝါယာရဲ့ထိပ်ဖြတ်ဧရိယာwire guageက 409lb(overhead)262lb(service),
စိုက်ထူရမယ့် ဓါတ်တိုင်က လုံခြုံမှုကိန်းကဘယ်လောက်,တစ်မိုင်အရှည်မှာရှိရမယ့်ဝါယာအလေးချိန်က ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့်တိတိကျကျရှိရတာပါ။သွယ်တန်းတဲ့အချိန်တုန်းက
လည်း လိုင်းလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှု,ဝါယာလျှော့အိမှုဘယ်လောက်,လိုင်းနဲ့မြေပြင်ရဲ့အကွာအဝေး,လိုင်းကြိုးပေါ် မိုးရေတို့ ဆီးနှင်းတို့ လေတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု ,ဝန်ထမ်းကြိုးbarrier wire,မိုးကြိုးလွှဲ lightning arrester စတဲ့အရာတွေကို
ဓါတ်အားဖြန့်ရာမှာလည်း ပြတ်တောက်မှုနည်းဖို့နဲ့အန္တရာယ်ကင်းဖို့လည်း ပင်မ,လိုင်းခွဲ,လိုင်းသွယ် (main, section,branch) အလိုက်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကရိယာများကို သူ့နေရာနဲ့သူတပ်ဆင်ကာကွယ်ထားရတာပါ။သုံးနေပြီဆိုရင်လည်း တာဝန်ရှိသူတို့က လစဉ်စစ်ဆေးရပြီး သတ်မှတ်သက်တမ်းပြည့်တဲ့(expired date)ကြိုးတွေ အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကို မလွဲမသွေ အသစ်လဲပေးရတာပါ။သိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာမှာတော့
ပုံတော်သလို ကြည့်လုပ်ကြပြီး ငါ့လက်ထက် ငါအဝစားသွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း တန်းမမှီ စံမမှီတွေ။လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကို ပစ္စည်းသွင်းတာအများဆုံးကလည်း အောင်သောင်းသား နေအောင်ပိုင်တဲ့IGEကုမ္မဏီကပါ။သတ်မှတ်specနဲ့မကိုက်လည်းဘယ်သူမှမပြောရဲပဲလက်ဝါးချင်းရိုက်ပေါင်းစားနေကြတာကြာပါပြီ။သုံးစွဲပစ္စည်းတွေညံ့လို့ တာဝန်ပေါ့လျော့လို့ ခုလိုပြတ်ကြတော့ သေတော့ သာမန်ပြည်သူတွေခံကြပေါ့ဆိုတဲ့ငို့ဘတွေပါ။လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတာလည်း ဝန်ကြီးကအစ ထိပ်ပိုင်းရာထူးတော်တော်များများက စစ်တပ်ကလာတာတွေချည်းပါ။ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းဖြန်းတတ်တဲ့တပ်ကမောင်တွေကလည်း professionအဆင့်မမှီတော့ သိတဲ့ တတ်တဲ့ ပညာရှင်တွေက ပြောလည်းနားမထောင်ပါဘူး။ပြုတ်သွားတဲ့ ဝန်ကြီးဧရာဝတီဇော်မင်းဆို မြန်မာပြည်လျှပ်စစ်မှာ သူ့လောက်သိသူမရှိဘူး ပြည်တွင်းကကုန်အောင်မသုံးနိုင်လို့ ပိုလျှံလို့နိုင်ငံခြားရောင်းတာ ဘာဖြစ်လဲကွလို့ပြောသွားသူပါ။ခုလည်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်က
တာဝန်အရှိဆုံးလူက သူတို့ကြောင့်ပြည်သူတွေ ဒီလောက်သေနေတာကို တာဝန်မဲ့ လက်လွတ်စပယ်ဘယ်လိုပြောသလည်းဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါ။အချုပ်ပြောရရင်တော့ တတ်သိပညာရှင်တွေ နောက်ရောက်နေပြီး ဘောင်းဘီဝတ် ဘောင်းဘီချွတ်တွေကြီးစိုးတဲ့ ဒီခေတ်စနစ်ကို
. Utto(BE,Electrical Power)
အရင်စစ်အစိုးရက.. လူထုအခွန်ငွေနဲ့အစိုးရလုပ်.. လည်ပတ်တာမဟုတ်လို့.. တိုက်ရိုက်တာဝန်မယူ.. မရှိ..။ သူပေးရင်ရမယ်..။ အတင်းတောင်းရင်.. ကျည်ဆန်ရချင်ရမယ်..။
(အခွန်ငွေရယ်.. လူထုရယ်… အစိုးရရယ်.. အင်ဖရာစရပ်ချာရယ်.. နောက်မှဆွေးနွေးမယ်.. )
လူထုက… သူတို့ကို.. ငွေပေး(အခွန်ပေး) ခန့်ထားတာလား.. ဆိုတာက.. တာဝန်ယူမှုနဲ့..တာဝန်သိမှုကို.. တိုက်ရိုက်ပြရပါလိမ့်မယ်..။
တိုက်ရိုက်တာဝန်ယူ..တာဝန်ရှိတာဟာ.. လူထုမှာသာဖြစ်ကြောင်းရယ်လို့.. ဖွင့်ချင်တာ.. တချက်..။
ဆိုင်ရာရပ်ကွက်မှာ.. မြို့နယ်မှာ.. မြို့ပြမှာ.. အဲဒါတွေပြင်ဖို့.. ဘက်ဂျက်ဘယ်ကလာမလည်း.. (အမြောက် x အကြိမ် တရာ)
ဘယ်လိုသုံးသလည်း.. ပွင့်လင်းမြင်သာ သိရ/သိအောင်လုပ်ရမှာက.. လူထုနဲ့..မီဒီယာတာဝန်..။
၂၀၁၅မှာ.. အဲဒီဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်ကို.. မဲမပေးပဲ.. …ဖြုတ်ချကြ.. ဒါပဲ..။
၂၀၁၀ မှာ nld ကို လွတ်တော်ထဲ ဆွဲသွင်းဖို့
လွတ်တော်နိုင်ငံရေးအကြောင်း nldနဲ့ အမာခံထောက်ခံသူတွေ
လက်ဆယ်ချောင်း အခါ နှစ်ရာ သုံးရာ
.တာဝန်ရှိတာဟာ.. လူထုမှာသာဖြစ်ကြောင်းရယ်လို့.. ဖွင့်ချင်တာ..
၂၀၁၅မှာ.. အဲဒီဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်ကို.. မဲမပေးပဲ.. …ဖြုတ်ချကြဖို့ ….
အခု.. 2014 တ၀ိုက်မှာ.. ဒီလို လူတွေ ဒီလို ထပ်မသေအောင်…
ပလက်ဖောင်းက.. ကောင်းတယ်ဆိုတော့.. အဟက်
ဒါမှ မှုတ်…… ဓါတ်တိုင်တွေကို ဖက်တက်ပြီး.
အဲဒီ ပြုတ်ကျတော့မယ့် ဓါတ်ကြိုးတွေကို.. ကိုယ်တိုင် တက်ပြင်ရမလား…
ဒါမှမှုတ်.. လျှပ်စစ်ဝင်ဂျီးထာန ရှေ့ မှာ.. ဆန်ဒ သွားပြရမှာလား…
အခုလောလောဆယ် 2015 မရောက်ခင်.. ဘာလုပ်နေရမလဲ..
လောလောဆယ်.. ၂၀၁၅မရောက်ခင်.. ၄၃၆ပြင်ရေးကို လက်မှတ်ထိုးပေးကြပါ..။
ဘယ်လူသားကိုမှ.. ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမျှော်မာန်လျှော့.. မကန်တော့ပါနဲ့..
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး.. အဲဒီပစ္စည်းရဲ့ဈေး..ခန့်မှန်းတွက်…။ (မီဒီယာပေါ်တင်..။ သတင်းစာတွေကိုစာပို့.)
ခန့်မှန်းပြီး.. လွတ်တော်အမတ်ဆီပို့.. ချပေးထားတဲ့ငွေနဲ့.. ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့.. လိုက်လျှောညီထွေသင့်မှုရှိမရှိ… လုပ်ခိုင်း.. (မီဒီယာပေါ်တင်..။ သတင်းစာတွေကိုစာပို့.)
မညီရင်.. ခိုးထားတဲ့သူခိုးတွေ.. ပြုတ်(ပြုတ်)အောင်လုပ်…
အဲဒီလျှပ်စစ်ဌာနအကြိးအကဲတွေ.. ကန်ထရိုက်ချပေးသူတွေ.. ကန်ထရိုက်ရပြီး တရုတ်ကပစ္စည်းသွင်းတဲ့.. ခရိုနီတွေအိမ်ကို.. ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှတ်တော်ကနေ.. တရာဝင်ပွင့်လင်းမြင်သာ.. အခွန်ဆောင်ငွေ..ပိုင်ဆိုင်ခွင့်..အတွင်းအပြင်ပစ္စည်း..ငွေစာရင်းတောင်းခိုင်း…။ လွတ်တော်ကနေ စစ်ဆေးကြားနာခွင့်လုပ်ခိုင်း(မီဒီယာပေါ်တင်..။ သတင်းစာတွေကိုစာပို့.)
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ.. လိုက်..ဓါတ်ပုံရိုက်.. (မီဒီယာပေါ်တင်..။ သတင်းစာတွေကိုစာပို့.)
မှတ်ချက်။ ။ အခုဒီပို့စ်မှာလုပ်နေတာတွေကို.. ပေါ့စေလိုပြောနေတာမဟုတ်..
တချို့ကိစ္စများဟာ..အသက်တွေနဲ့ရင်းရတာမို့.. လက်ပူတိုက်(လက်ပူတိုက်(တာက.. အဖြေလို့..တယ်…မ…မြင်…။ :buu:
မှတ်ချက်။ ၂။ အခုလို နောက်ကြောင်းလိုက်.. မီဒီယာပေါ်တင်.. အလုပ်မယ့်သူရှိရင်..ပြောကြပါကွယ်…..။
ဒေါ်လာ၁၀၀ ကနေ.. “စလို့”. ရင်းနှီးငွေကုန်ကျစရိပ်မတည်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်း…။
စာကြမ်းပိုးတို့ရေ…ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးချက်က မြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ပါ
ခင်ဗျားတို့ပြောသလို “ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် အလုပ်ဆင်းနေရသော်လည်း စစ်မြေပြင်ကို စစ်တိုက်ထွက်သွားသောစစ်သားများလို အချိန်မရွေး အသက်အန္တရာယ်နှင့် ကြုံပြီး သေပွဲဝင်သွား ရနိုင်ပါသည်။
မသိရင်မကြောက်ဘူး…မပူပန်ဘူး…ခုတော့ ကျုပ်တို့မှာသိသိချည်းဆိုတော့…ကြောက်နေ ပူပန်နေရပါတယ်ဗျာ….. :buu:
တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရ လုပ်နိုင်တာ၊ မလုပ်နိုင်သေးတာကတစ်ပိုင်း…
လျှပ်စစ်အန္တရာယ် နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အခြေခံအသိလေးတွေ ရအောင်တတ်အားသ၍ ပညာပေးကြဖို့
( ကိုစွယ်တော်ရေးတဲ့ သာမန်လူပြိန်း နားလည်နိုင်တဲ့ပညာပေးပို့စ်မျိုး များများရေး များများရှယ်ကြဖို့)
အစိုးရတို့..MEPE တို့ကို အပြစ်တင်တာလည်းတင်ပေါ့…ကျုပ်တို့ဖာသာ အကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲ စဉ်းစားကြစေလိုပါဒယ် ( CD to FR) :boss:
ဇီဇီ မန့်ထားတဲ့ထဲက ဖျာ ဆိုတာ လျှပ်စစ်မီးနိုင်တဲ့ ရာဘာပြားလို ပလပ်စတစ်ပြားလိုသစ်သားပြားလို အချပ်တွေကိုပြောတာပါ။ ပန်းတနော် သင်ဖြူးဖျာ နဲ့ မှားမစိုးလို့။
ပြည်မြို့က နွားနှစ်ကောင် ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
မြန်တျန့်ပြည်သတင်း ဖတ်ရတာ မျက်စေ့နဲ့ ဦးနှောက်မသက်သာဘူး…
မိုးရွာလို့ ရေကြီး… ရေကြီးတော့ မြွေထွက် ၊ မိုးသည်းတော့ ဓာတ်ကြိုးပြတ်သတဲ့…
မြွေကိုက်တာက အနားမှာ လူရှိလို့ ကံကောင်းရင် ဆေးမှီပေမည့်….
ဓာတ်လိုက်တာက သွားကူတဲ့လူပါ မရဏကို အဖော်ခေါ်သွားသေးတာ…
ဆိုတော့… လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြက်ခြံက ကြက်ချေးနံ့ နံတာကို ဆွေးနွေးမည့်အစား…
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ၊ ဟိုအရေးဒီအရေးတွေ ဆန္နပြကြမည့်အစား…
လောလောလတ်လတ် လူတိုင်း ကျီးလန့်စာစားနေရတဲ့ ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကို…
နောင်လည်းမဖြစ်အောင်… အခုလည်း ကာကွယ်ရအောင် ဆွေးနွေး အရေးဆိုသင့်တယ်…
လူ့အသက်တစ်ချောင်းကို ကြေးဖြတ်ပြီး လျော်လို့ရကြေးဆို …
အဲသည့် လျှပ်စစ်ဝံမင်းတွေအတွက် ပေါင်ချိန်ဓားစက်ဖိုးပါ အပိုဆောင်းပေးလိုက်ဦးမယ်…
လောလောဆယ်တော့… မြန်တျန့်နိုင်ငံသားအားလုံးကို အကြံပေးချင်တာက…
ပြည်တွင်းဖြစ် ပုသိမ်ထီး ဘုန်းကြီးဆောင်းတဲ့ထီးတွေ သုံးသင့်တယ်…
ထီးရိုးက ဝါးနဲ့လုပ်ထားတာမို့လို့ ရေမစိုရင် ဖဲထီးလို ဓာတ်လိုက်မှာမဟုတ်…
ဓါတ်တိုင်မှာ ဓါတ်ကြိုး သွယ်တန်းတဲ့အခါ Live ကြိုး ၃ချောင်းကို ဓါတ်တိုင်မှာ တပ်ထားတဲ့ ကြေးကွင်းအဝိုင်းလေးရဲ့ အလယ်ကဖြတ်သန်းပြီး သွယ်ကြတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ဓါတ်ကြိုးပြုတ်ကျ ပြတ်ကျတဲ့အခါ ပြတ်သွားတဲ့ကြိုးနဲ့ ကြေးကွင်းအဝိုင်းထိပြီး ဆိုင်ရာ Station မှာ breaker ပြုတ်ကျပါတယ်။ ကြိုးပြတ်ကျရင် ဓါတ်မလိုက်အောင် လုပ်ထားတဲ့အစီအမံစံနစ်ပါ။ ခုနောက်ပိုင်း ကြိုးကြီးတွေနဲ့ လဲလှယ်တဲ့အခါ ဒီစံနစ်တွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်။
Maung Maung Myint ဒီကြေးကွင်းတွေကို အလေးချိန်နဲ့ ရောင်းစားခဲ့ကြတယ်လို့ မှန် မမှန် သီးခြားအတည်မပြုနိုင်တဲ့ သတင်းစကားတော့ ကြားဖူးခဲ့တယ်။
လမ်းမှာကြိုးတွေလဲတဲ့အချိန်မှာ နဂိုရှိနေတဲ့ကွင်းတွေ မရှိတော့လို့ သိချင်စိတ်နဲ့မေးမြန်းထားမိတဲ့ ဗဟုသုတပါ။
4 hrs · Like · 24
Ko Nyi အဲ့ လို ရောင်း စား ခဲ့ တာ လည်း တ ပိုင်း ပေါ့ လေ
တ ကယ် တမ်း က အဲ့ ဒီ earth ring တွေ ရှိ နေ ရင် load များ တဲ့ အ ချိန် ဆို ကြိုး က လျော့၊ သူ နဲ့ သွား ထိ ပြီး line fault မ ကြာ မ ကြာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် line fault မ လိုက် ချင် လို့ line men တွေ က ဖြုတ် ပစ် ကြ တာ။
နောက် တစ် ချက် က ကျွန် တော် တို့ ဆီ မှာ တိုင် က နေ မီ တာ တွေ ဆီ ကို မီ တာ တစ် လုံး ကြိုး ၁ ချောင်း နှုန်း သွား နေ တော့ တိုင် မှာ earth ring ရှိ နေ ရင် လိုင်း ချိတ် ရ တာ အ ဆင် မ ပြေ ပါ ဘူး။
အဲ့ ဒါ တွေ ကြောင့် မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ earth ring စ နစ် ပျောက် သွား တာ ပါ။
4 hrs · Like · 35
Ko Nyi နောက် ဆုံး အ ချက် က တော့ ဘဏ္ဍာရေး အ ခြေ အ နေ ကြောင့် ပါ။
4 hrs · Like · 18
Maung Maung Myint ကျေးဇူးပဲ ကိုညီရေ။ တဆင့်စကားရယ် နည်းပညာရယ် သေသေချာချာမသိလို့ သီးခြားအတည်ပြုချက် မရတဲ့စကားဆိုပြီး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ရေးရတာပါ။ အခုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတော့ မဟုတ်တဲ့ အပြစ်ဆိုစကားတွေ မပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ သေသေချာချာ ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
4 hrs · Like · 11
Aung Myat အမြင်မှန်ရတော့ အတွေးမှန်၊တော့ အပြောမှန်၊ တော့အလုပ်မှန် တော့ အနေမှန်တာပေါ့။
Myo Aung Kyaw ဒါ ဆို ဒီ safety ကိစ္စ ကို ရော ဘယ် လို နည်း နဲ့ ဖြေ ရှင်း လို့ရ မလဲ။ နောက် ခု အခါ မှာ အိမ်တွေ ရဲ့ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု ဟာ အဆ ပေါင်း များ စွာ တက် လာ တယ်။ ဒါနဲ့ လိုက် လျောညီ ထွေဖြစ် ဖို့ က တော့ လိုင်းကြိုးတွေ ရဲ့ အရွယ်အစား က ကြီး လာ ရမှာ ဖြစ် ပေ မဲ့ ဒီကြိုး တွေက နဂို အတိုင်း ဆို တော့ မခံနိုင် ပဲ ပူပြီးနီရဲလာ မယ်။ နောက် ဆုံး တော့ ပြတ် ကျ တော့ တာ ပါပဲ။ Root cause တွေကို ဖြေ ရှင်း ဖို့နဲ့ Safety Precaution ပိုင်း တွေ ကို နား လည်သူ ပညာရှင် ပိုင်း က နေ ဖြေရှင်း ပေးစေချင် ပါ တယ်။
Aye Aye Khine ဓါတ်ကြိုးတစ်ခုလုံး မီးလောင်တာမြင်ဖူးလို့ ကြောက်စရာကြီးပါ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်းကို ဝင်တဲ့ကြိုးပါ အစကအဝင်ကမီးတောက်ကာ နောက်တော့ တစ်ချောင်းလုံးလောင်သွားတာ အပေါ်ကာဗာလောင်သွားတာနဲ့ တူတယ်နော် loadမနိုင်လို ဖြစ်တာလားရှင်
Maung Maung Myint သူငယ်ချင်း
solutionကတော့ ကြိုးကြီးလဲပြီး earth ring ပြန်တပ်တာပါပဲ။ ဘဏ္ဍာရေးမှာ လုံလောက်အောင်မရှိလေတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး
အပ္ပမာဒေန သမ္မာဒေဌ မမေ့မလျော့တဲ့သတိနဲ့ လမ်းလျောက်ကြရမှာပေါ့။
Ko Nyi အဲ့ဒီလိုတော့ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ။
အခုခေတ်မှာ Earth Ring တွေတပ်ပြီး Protection လုပ်တဲ့ စနစ်က တိမ်ကောနေပါပြီ။
သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ PLC သုံး Relay တွေကို စတင်တပ်ဆင်နေပါတယ်။…See More
Ko Nyi Ma Aye Aye Khaing
အဲ့ဒီလိုလောင်တာ မျိုးက Load မနိုင်လို့ ဆိုတာထက် Shock ဖြစ်လို့ လောင်တာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘူယ အားဖြင့် အိမ်သုံးမီတာတွေအတွက် Service Cable သွယ်ရင် တိုင်ထိပ်မှာ Arial Fuse တစ်ခု၊ မီတာ အထွက်/အိမ်တွင်းအဝင်မှာ Fuse/Breaker တစ်ခု တပ်လေ့ရှ…See More
44 mins · Like · 3
Tin Latt ညွှန်ကြားချက်ထွက်တယ်။ အောက်ခြေက လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်။ မြို့ကြီးတွေ ပိုဆိုးတယ်။ မြင်းခြံနယ်ထဲ မှာတော့ လိုင်းသစ်မှန်သမျှ မတပ်မနေရ။ သေချာလည်း ကြီးကြပ်ပါတယ်။ လိုင်းဟောင်းတွေမှာလည်း လိုက်တပ်ဖို့ သေချာလုပ်ပါတယ်။
ခုနပြောသလိုပဲ ကျနော်တို့ကတော့ နယ်ဆိုတော့ သေချာ ကြီးကြပ်နိုင်တယ်။ မြို့ကြီးသွားရင်တော့ လူမြင်ကွင်းလောက်ပဲ တပ်ကြတာ။ (COPIED from KP)
ဦးကြိးမိုက် ရဲ့ သူငယ်ချင်းစတေးတတ် မှာ ပါနေတာတွေက ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တဲ့ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်ဆိုတာပါဘဲံ။
အိမ်တွေ အခန်းတွေ တိုးလာတယ် ။ မီးအားတွေ ပိုသုံးလာတယ် ။ ပိုက်ပိုက် အဆင်ပြေတာနဲ့ အဲယားကွန်းတွေ တပ်ကြတယ် .လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးတွေ မီးဖိုတွေ အလွယ်တကူ ဘဲ ၀ယ်သုံးကြပါတယ် ။
ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ဝါယာ ဘယ်လောက် ခံနိုင်လဲ ဘယ်သူ့မှ မမေးကြပါဘူး ။
ကိုယ့် အိမ်ရှေ့ က ဓါတ်တိုင် က ၀ါယာကြိူးတွေ ပြောင်းမသွားတာ သတိမထားမိကြပါဘူး ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘေးမှာ ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းတွေ ပြောင်းသွားပြီး အခန်းအရေအတွက်လူအရေအတွက် ၆ ဆ ကျော် တိုးသွားပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ မှာ သုံးတာတွေ အားလုံး ဒီ ဓါတ်ကြိုးမှာဘဲ လာချိတ်ကြပါတယ် ။
load တွေသာ တိုးလာတယ် ။ စစ်ဆေးကန့်သတ်သူလည်းမရှိပါဘူး။ ကန့်သတ်နိုင်စွမ်းလည်း မရှီပါဘူး ။ လတ်တလော ပြေလည်ဖို့ သာ အဓိက ထား ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ် ။ ဘဖောပြောတဲ့ ဆင်းရဲ တာ အဓိက ဆိုတာပါဘဲ ။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွေမှာ earth ကြိုးအိမ်တိုင်းစေ့ မသုံးနိုင်သေးပါဘူး ။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အများစုက နှစ်ချောင်း ခေါင်း(2pin plug) တွေ ဖြစ်နေတာပေါ့ ။ အဲ့ဒီ့ မှာ ကထဲ က လျှပ်စစ်လုံခြုံ မှု မရှိတော့ပါဘူး ။ Earth ကြိုးသုံးရမယ် ။ Earth Leakage Circuit Breaker တွေ သုံးလာမယ် သုံးချောင်းခေါင်းတွေ (3pin plug and socket) အပေါက်တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆို ဆို အိမ်တွင်း လျှပ်စစ် ဘေးအန္တရယ် အကြီး အကျယ် နည်းသွားမှာ ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေ မသုံးမနေရ ဆိုတဲ့ အမိန့်လည်း ရှိပုံ မပေါ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ် ( ကျွန်တော် မသိတာ လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါ့မယ်)
၀င်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရည်အသွေးမမီဘူး ဆိုတာ တင်မက ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာလည်း ၀ါယာကြိုးတွေ ဘယ်လောက်ခိုထားမလဲ မပြောနိုင်ပါဘူး ။ ဒါတွေကို သေခြာစိစစ်တဲ့ လာတ်မစားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါ်ဖို့ လိုပါတယ် ။
farfalla တံဆိပ် ( ရန်ကုန်မှာ စကာင်္ပူနိုင်ငံသားဦးစီးနေတဲ့ ကုမ္မဏီ) မီးဖိုမှာ ခေါင်းက သုံးပင် (3 pin flat type plug) နဲ့ ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဖြုတ်ကြည့်မိတော့ earth ၀ါယာ မပါ ပါဘူး ။ လုံးဝ မထင်မိပါဘူး ။ ဒီလို နှစ်ကြိုးဘဲ ပါတာကို3pin plug တပ်ထားပြီး safe ဖြစ်သယောင်လုပ်ထားတာ ။ စကာင်္ပူ မှာသာဆို ဒီတံဆိပ် ဘယ်လောက် ဒါဏ်ရိုက်ခံ ရမလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်မိပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အပူအပင်ကင်းစွား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။
ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျမှာ ကြောက်လို့ အပေါ်မော့ကြည့်နေမှ အပေါက်ကျွံလို့ ဒုက္ခိတ ဖြစ်မဲ့ အဖြစ် ။ ဇီဇီတင်ထားတဲ့ ထဲကလို ကားတိုက်လို့ သေရတဲ့ အဖြစ် ဖြစ်နေကြဦးမယ်နော့်( အဲ့ဒါက တကယ်တော့ ဓါတ်ကြိုးပြုတ်ကျလို့ သေရတဲ့ သေသူတွေထက် အရေအတွက်ပိုများတယ်) ….
၀န်ကြီးဌာန ကတော့ ပျော်မှာဗျ ..ဒါမှ ဘတ်ဂျက်ထွက်အောင်လို့ ..
အမြန်လမ်း သေတယ် သေတယ် ဆို အော်လွန်းတော့ အမြန်လမ်းအတွက် ဘတ်ဂျတ်တွေချပေးလိုက်တယ်လေ .. ပညာရေးတို့ ကျန်းမာရေးတို့ထဲ ကဘယ်လောက် ဖဲ့ပေးလိုက်ရမလဲ မသိ …
မှတ်မိသလောက်.. တိုကျိုက.. နံရံပလပ်ပေါက်တွေမှာ.. ဂရောင်း(အပ်)ကြီုးမပါဘူးဗျ..။
အင်း.. ယူအက်စ်တော့.. အများအားဖြင့်ပါတယ်..
တူတာကတော့.. ဗို့အား.. ၁၀၀ -၁၁၀.. ၀န်းကျင်..
အင်ဖရာစရပ်ချာပြောင်းဖို့ဆိုတာ.. ဘီလီယန်ဒေါ်လာမို့.. ဘက်ဂျက်သုံးဖို့ရောက်ဦးမယ်..
တရက်.. ထမင်းတနပ်.. ၁ဒေါ်လာနဲ့..၂နပ်..၂ဒေါ်လာနဲ့.. လူ ၁သန်း..။
တရက်..တရက်အပိုကုန်နေတဲ့.. ဒေါ်လာ၂သန်း..တနှစ်ဒေါ်လာ(ဒေါ်လာ)သန်း၇၀၀ ဆီရောက်ဦးမယ်..။
♩ ♪ ♬ကိုလူပျိုထရံပေါက်က… ♮ ♯♭♫ ခြေထောက်ကိုဆွဲ.. တွဲလွဲ..
♩♪ ♫ ♬ ♭ ♯
နှစ်ပေါက်ဘဲ တွေ့လို့ ground မပါဘူးလို့ ကံသေကံမ ပြောလို့ တော့ မရဘူး သူကြီးရဲ့ ။2pin plug တော့ 2pin plug , ဒါပေမဲ့ ground ကို ဘော်ဒီမှာ ကပ်ထားတဲ့2pin plug တွေ ရှိတယ် ။
volt ကို ၁၁၀ ပြောင်းဖို့ ဆိုတာ ခုနေမဖြစ်နိုင် မလုပ်သင့်တော့ပါ။
ဆွမ်းတော်တင် ပန်းတင် ဆိုတာက တော့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားး တိုးပွားတာနဲ့ တင် ကြေနိုင်ကြောင်းပါ …
သူကြီးပြောတာ မှန်တယ် .. ဂျပန်မှာ ground မပါ ပါ ။
ဘာ​ပြောရမှန်း​တောင်​မသိ​တော့ဘူး အဓိက က လူကို လူလိုမသိတာ လူကို လူလို တန်​ဘိုးမထားရာက စတာပဲ ။ လူကို လူလို့ အသ်ိအမှတ်​ပြုမဲ့ လူကို လူလို တန်​ဘိုးထားမဲ့ ဥပ​ဒေ ​တွေ​ပေါ်​ပေါက်​ဖို့နဲ့ အသက်​၀င်​ဖို့လိုတယ်​
ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ရှိလာ၊ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထီးဆောင်းစေတီ ရင်ပြင်တွင် ၀ိုင်ယာကြိုးပေါက်နှင့်ထိနေသော သံပန်းကိုထိမိရာမှ ဓာတ်လိုက်ပြီးနှစ်ဦးသေဆုံး
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထီးဆောင်းစေတီ ရင်ပြင်ပေါ်တွင် ဝိုင်ယာကြိုးပေါက်ကို ထိမိရာမှ အမျိုးသားနှစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မှုဖြင့် သေဆုံးသူ ၃၃ ဦးခန့် ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်မှာ ဘီးလင်းမြို့နယ် ဇုတ်သုတ်ကျေးရွာ၊ ကျိုက်ထီးဆောင်းစေတီသို့ ဘုရားဖူးရန် လာရောက်သော ပေါင်မြို့နယ် မုတåမမြို့ ပုသိမ်ကွင်းရပ်ကွက်နေ ထက်မြက်အောင် ၁၂ နှစ် သည် စေတီတော် အနောက်မြောက်ထောင့် အရောက်တွင် အလှဆင်လျှပ်စစ်မီးသီးများ သွယ်တန်းထားသည့်ဝိုင်ယာကြိုးမှာ ပေါက်နေပြီး လိပ်ကန်တွင် ကာရံထားသော စတီးသံပန်းသို့ လျှပ်စစ်စီးဝင်နေသည်ကို မသိရှိဘဲ ယင်းသံပန်းကို တံတောင်ဖြင့် ထောက်မိပြီး ဓာတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို တောင်စွန်းနယ်မြေ ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ်(၁၂/၂ဝ၁၄) ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဇူလိုင် ၁၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်က လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး ပြတ်ကျမှုကြောင့် ဈေးအတွင်း ဈေးဝယ်နေသူ အမျိုးသမီးသုံးဦး အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးသွားပြီး ကလေးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးခဲ့သော အမျိုးသမီးသုံးဦးအနက် သေဆုံးသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကမူ လျှပ်စစ်ဌာနအနေဖြင့် ၎င်းတို့စိတ်ကျေနပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကာ မ ဆောင်ရွက်ပေးပါက တရားစွဲဆိုသည်အထိ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးကလည်း ယခုဓာတ်ကြိုးများ ပြတ်ကျမှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေနေတာဟာ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လျှပ်စစ်ဌာနတွေမှာ အဓိကတာဝန်ရှိကြောင်း၊ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေများအား သေမှုသေခင်းအဖြစ်သာ ရေးဖွင့်ခြင်းထက် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူများကို တရားစွဲဆိုသင့်ကြောင်း၊ ပြည်သူများ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုကို ကိုယ်ချင်း စာစိတ်ထားပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင် ပေးသင့်ကြောင်း သုံးသပ်ကာ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဌာနသို့ ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဇွန် ၂၁ ရက် ညနေပိုင်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်း ဈေးအနီး မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေချိန် ၌ ဟောင်းနွမ်းဓာတ်ကြိုး ပြတ်ကျရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး ဇွန် ၃ဝ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဌ) ရပ်ကွက် ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျမှုကြောင့် အမျိုး သားတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ မိုးဦးရာသီမှ မိုးလယ်ရာသီ သို့ ရောက်ရှိချိန်ထိ လျှပ်စစ်ကြောင့် သေဆုံးမှုများ မကြာခဏဆိုသလို ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား လာခဲ့ရာ သွယ်တန်းထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ် ပြည်သူများ၏ စိုးရိမ်မှုမှာ တစ်စတစ်စ မြှင့်တက်လာနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
အရမ်း အရမ်း ကို ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေး မို့
ဒီ စာဖတ်ပြီး ဒီ ရွာသူ ဖြစ်ရတာ ကို အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိတဲ့ စိတ်ဖြစ်သွားကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ။
ကိုယ်နဲ့ ဝေးတဲ့ပညာကြီး။ :-))
မသိတဲ့ အကြောင်းတွေ ဗဟုသုတ ရလိုက်တာမို့ စီစဉ်သူများရော ပေါ်တော်မူကြီးများ ဖြစ်တဲ့ စွယ်တော်ရွက်၊ ကထူးဆန်း ရော၊ ဝင်ဆွေးနွေး အားဖြည့်ပေးသူများကိုပါ ကျေးဇူးကြီးပါ။
မြန်မာပြည် က ဓာတ်တိုင် မှာ ဓာတ်ကြိုးတွေ ပွစာကြဲနေတဲ့ ပုံ ကတော့ ဘီဘီစီ ရဲ့ Top Gear (Burma Special) ကနေတစ်ဆင့် ကမ္ဘာသိပါဘဲ။
မြို့လည်ထဲ က လမ်း တစ်လမ်း ထဲ ဝင်ရိုက်ပြထားတာ။
အခုနောက်ပိုင်း ကျုပ်လည်း လမ်းမပေါ် လျှောက်သွားနေရင်
အဲ့ဒီ .. ဘာတဲ့ .. လျှပ်စစ်မိုးပျံမိုင်းဗုံးတွေ ဘယ်အချိန်များ ပြုတ်ကျလာမလဲဆိုပြီး
မိုးပေါ်ကြည့်ကြည့်ပြီး လမ်းလျှောက်နေရဒယ် …
မတော် .. ကိုယ့်ပေါ် ပြုတ်ကျလာရင် .. ဝှီးးး ဘုတ် .. ဆို .. ဂန့်သေမှာပါပဲလေ …
အမငီး .. ပြောနေရင်း ကြက်သီးတောင် ထလာဘီ …
ဟိုးးး ရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီးလို
လက်မ မကောင်း လက်မ ဖြတ်
ဆိုတဲ့ စနစ်ကို သုံးဖို့ ကောင်းတယ် ….
လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး ပြုတ်ကျလို့ လူတစ်ယောက် သေရင်
လျှပ်စစ်ဌာန ဝန်ကြီးကို သေစားသေစေ အမိန့်ချ။
လူ၂ယောက် သေရင် အဲ့ဒီဝန်ကြီးနဲ့ သူ့အောက်က တစ်ယောက်ကို သေစားသေစေ အမိန့်ချ။
အဲ့ဒီလိုဆို ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ဂရုမစိုက်တောင်မှ သူတို့ အသက်ကိုတော့ ဂရုစိုက်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
တဂယ်လို့ … အဲ့ဒီစနစ်ကြီး ကျင့်သုံးတော့မယ် ဆိုရင်
ကျုပ်ကိုတော့ လျှပ်စစ်ဘက်မှာ လာမခန့်နဲ့နော် …
ဘာရာထူးဂျီး ပေးပေး လုပ်ဘူး …. ဟီးဟီး
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ
Voice ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ချုပ် ကို ကျော်မင်းဆွေ ရဲ့
FB က ကူးလာတာပါဗျာ။
15 hrs · Yangon · Edited ·
ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျပြီး လူသေဆုံးမှု ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ရန်ကုန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့သူကိုမေးတော့ ဓာတ်ကြိုးတွေ ပြင်နေတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားတာ မသိတဲ့ ပြည်သူကို ကက်ကက်လန် ရန်ထောင်ပြီး တုံ့ပြန်တယ်။ ဘာမှ မဖြစ်သေးတဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက အစိုးရတာဝန်ရှိသူကတော့ အဲလိုဖြစ်ရင် လျှပ်စစ်ဌာန တာဝန်ခံကို အရေးယူမယ်လို့ တုံ့ပြန်တယ်။ လွဲတော့ အတော်လွဲနေပြီလို့ထင်တယ်။
တာဝန်သိ၊ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံရမယ့်သူက သူတို့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့သူတွေမှ အားမနာ၊ သူတို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းကို မဖတ်၊ မသိတာနဲ့ မသိရကောင်းလားဆိုပြီး အပြစ်တင်တာမျိုးက လုပ်သင့်လား၊ မလုပ်သင့်လားဆိုတာ သာမန်စဉ်းစားဆင် ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတောင်သိတယ်။ အမိန့်ပေး၊ အမိန့်ခံစနစ်အောက်မှာ ဆရာမွေး၊ တပည့်မွေး၊ ကြီးနိုင် ငယ်ညှင်း ပုံစံနဲ့ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ဘယ်နားလည်မလဲ။ ဒီလို တုံ့ပြန်တာကိုကြည့်ပြီး ဒီလို နေရာအဆင့်မျိုးက တာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာ အခန့်ထားခံရတဲ့သူတစ်ယောက်တောင် ဒီလို တုံ့ပြန်နေရင် တခြားနေရာဌာနတွေက ဒီလို လူသိရှင်ကြားမဖြစ်တဲ့ ကိစ္စအရပ်ရပ်မှာလည်း သူ့လိုပဲ ခန့်ထားခံရတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကလူတွေက ဘယ်လောက်များ ဆိုးဆိုးရွားရွား တုံ့ပြန်နေကြမလဲ။ အဲဒီဒဏ်ကို သူနဲ့ အနီးဆုံး လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ အဲဒီဌာနနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ ပြည်သူအများစု ဘယ်လောက် ဒဏ်ခံနေရမလဲ တွေးကြည့်မိတယ်။
ဗြူရိုကရေစီယန္တရားမှာ ပြည်သူကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နေရာမှာ အမိန့်ပေးအမိန့်ခံ ပုံစံနဲ့ ပြည်သူကို ဆက်ဆံတတ်တဲ့ ဗြူရိုကရက်တွေ၊ အရာရှိဆိုးတွေ တိုက်ရိုက်ခန့်ထားနေသမျှ ဘယ်အစိုးရတက်တက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနနဲ့ အစိုးရကိုလည်း သိက္ခာချ၊ အစိုးရနဲ့ လူထုကိုလည်း ရန်တိုက်ပေးနေသလို ဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။
အဲဒီအတွေးနဲ့ ဒီနေ့ထုတ် သတင်းစာအတွက် ရေးဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကြီးကို ဝေဖန်ဖို့၊ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲဖို့နဲ့ ဆင်ခြင်သတိပြုမိကြဖို့ မျှဝေလိုက်တယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျကာ လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် အလားတူ အဖြစ်အပျက်မျိုး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူကို အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးကျော်မြင့်က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ထိုသို့ ပြောဆိုနေချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ခိုင်က တစ်မြို့လုံးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးများ လဲလှယ်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင် အစိုးရအာဘော် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် သတင်းစာများတွင် ကြေညာထားသော်လည်း မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်နေကြကြောင်း၊ လုပ်နေလျက်နှင့် ဖြစ်နေကြောင်း တုံ့ပြန် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
အထက်ဆိုခဲ့ပါ ပြောဆိုချက် နှစ်ခုတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးသည် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေကို သိရှိပြီး၊ ယင်းအပေါ် မည်သို့ တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလည်း သိသူဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းမှာ ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်စေသော အခြေခံ အကြောင်းတရားများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ရေရှည်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုများ မပါဝင်ဘဲ ရေတိုဖြေရှင်းမှု ဖြစ်လင့်ကစား ပြည်သူလူထု၏ စိတ်သောကကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ နှစ်သိမ့်မှု ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တာဝန်သိသော အစိုးရဟု ဆိုနိုင်သည်။
လက်တွေ့အားဖြင့် ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျ၍ လူသေဆုံးမှုများ ရှိနေသော ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ အဓိက တာဝန်ရှိသူ၏ တုံ့ပြန်မှုမှာမူ တာဝန်သိစိတ်ထက် ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျ၍ သေဆုံးသွားသူများနှင့် ပြည်သူအများ၏ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေထိုင်ကြခြင်းကိုပင် အပြစ်တင်ထားသည့် သဘော တွေ့ရသည်။ တာဝန်သိစိတ်ပင် မရှိသော တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံရမည့် နေရာမျိုးတွင် တာဝန်ပေးထားခြင်းမှာ များစွာ စဉ်းစား သုံးသပ်ဖွယ်ရာ ရှိသည်။
အစိုးရ အပါအဝင် ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားအတွင်း ရှိနေသူများသည် ပြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ ပြည်သူအများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ထိုက်သင့်သည့် ရာထူးတာဝန်၊ ခံစားခွင့်များပေး၍ တာဝန်ပေးခံရသူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် မိမိတို့တွင် အားနည်းချက် ရှိပါက ပြည်သူလူထုထံ ပန်ကြား မေတ္တာရပ်ခံရမည့် လူထုဆက်ဆံရေး နည်းနာကိုပင် မသိရှိပါက ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်အားကိုးအပ်သည့် ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်လာရေး အလှမ်းဝေးနေဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်ပေသည်။
မန့်ရမှာတောင် အားမရှိဘူး.. သူများတွေက စာ အရှည်ကြီးတွေနဲ့ ဆိုတော့…
တခု ကြားဖူးတာပါ… မိုးရွာလို့ ဓာတ်ကြိုးပျက်ကျ.. ရှော့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ အော်တို မီးလိုင်းကို ဖြတ်ချတဲ့ စနစ်.. ဘရိတ်ကာ စနစ်.. သုံးထားတယ် ကြားတယ်.. ဘယ်မြို့နယ်တွေဆိုလဲ မသိဘူးဗျ.. အဲလိုဆိုရင်တော့ ဓာတ်လိုက်ပြီး သေတာ မဖြစ်လောက်တော့ဘူး ထင်တယ်…
ELB ( Earth Leakage Breaker ) ပြောတာပါ ရေမြေ့သနင်း ခင်ဗျာ။
တကယ် sensitive ဖြစ်တဲ့ Breaker တွေပါ။ သူကလဲ test ကို တစ်တခါ လုပ်ပေးရတယ်။Test လုပ်လို့ မှ မပြုတ်တော့ဘူး ဆိုရင် အသစ်ထပ်တပ်ရတယ်။
ရေမြည့်သလင်း သိထားတာမမှား။ သို့သော်လက်တွေ့လောက၌ မမှန်။ ကြိုး ဝန်ပိုမှုမှကာကွယ်ရန်ဖြူးစ်တတ်ရသည်။ ဖြူးစ်ပြတ်သွားလျင် မပြတ်အောင် ပိုကြီးသောဖြူးစ် လဲတပ်၏။ ဝါယာကြိုး ရှော့ short circuit ဖြစ်၍မီးလောင်နေသော်မှ ထိုဖြူးစ်မပြတ်တော့။ ဤကားလက်တွေ့လောကတည်း။
အို.. ဗုဒ္ဓေါ… သောက်ကျိုးနည်း.. EPC ပါတကား..
လျှပ်စစ် အစားးး လျှပ်ဆစ် လို့ ပြောင်းးလဲ ခေါ်သင့်ပါတယ်။
အနော် တို့ နိုင်ငံ က စစ် ပါ တာတွေ ကောင်းးးကျိုးးးမပေးးးလို့ ပါ။
7 Day သတင်းပါဗျာ။
ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးရုံးချုပ်အနီးရှိ ဗို့အား(၆၆၀၀) ဓာတ်ကြိုးသုံးကြိုး ပြတ်ကျမှုတစ်ခု ယနေ့ နေ့လယ် ၃ နာရီက ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ဗို့အားပြင်း ဓာတ်ကြိုးသုံးကြိုးသည် အလုံမြို့နယ်၊ စောရန်ပိုင်(တောင်)ရပ်ကွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးရုံးချုပ်အနီးတွင် ပြတ်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြတ်ကျသည့်ကြိုးအရှည်မှာဓာတ်တိုင် ငါးတိုင်စာခန့်ရှိကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသည့် 7Day Daily သတင်းထောက်က ပေးပို့သည်။
“အဲဒီလမ်းက လူသွားလူလာများတဲ့လမ်းပါ။ အလုံဈေးကို အဲဒီလမ်းကနေ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လျှပ်စစ်ရုံးနဲ့နီးတဲ့အတွက် ဓာတ်အားကိုချက်ချင်းဖြတ်ချလိုက်လို့လူအထိအခိုက်မရှိဘူး”ဟု သတင်းထောက်က ပေးပို့ထားသည်။
ပြတ်ကျသွားသည့် ဓာတ်ကြိုးများကို လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်း သုံးဆယ်ဖြင့် ချက်ချင်းပင် ကြိုးသစ်ပြန်လဲတပ်ကာ ပြင်ဆင်နေပြီး ပြင်ဆင်ချိန် သုံးနာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးရုံးချုပ်မှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရဲဘော်ဘလက်ရေ….အဲ့..7 Day သတင်းပါ ဗို့အားက မှားနေသလားလို့..
66KV(66000V) ကနေ33KV(33000V) ကိုပြောင်း
33KV(33000V) ကနေမှ 11KV(11000V) ကိုပြောင်း
11KV(11000V) ကနေမှ 0.4KV(400V) ကိုပြောင်းပြီးမှ လူတွေသုံးနေတဲ့ ပုံမှန်းလိုင်းပေါ်ရောက်တာဗျ…
အပေါ်ကသတင်းမှာ0တစ်လုံးကျန်သွားပုံရတယ်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ရှိ ရပ်ကွက် ထရန်စဖေါ်မာများသည် 6.6KV/0.4KV Step down TR များဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတည်းကစနစ်ကို ဆက်သုံးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မြကန်သာကိုလည်း 6.6KV (၆၆၀၀ဗို့) ဘဲ ပေးထားတာဖြစ်ပါကြောင်း။
(စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတော့ 11KV/0.4KV သုံးတာတွေ့ရများလို့ တူတယ်ထင်တာ)
ဓာတ်ကြိုးပျက်ကြတာ အီးပီစီ ကြောင့်လို. သွားမပြောလေနဲ.ဗျို. တော်ကြာ ဓာတ်ကြိုးပြင်နေလို. မီးပျက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ. မီးတွေ ပျက်နေမှာ မကြောက်ကြဘူးလားဗျို…. မီးလေးမှန်မှန်ရနေတာ အကြောင်းပြချက်ရသွားလို. ပြန်ပျက်နေပါအုံးမယ်ဗျာ….. သိတယ်မို.လား.. အမှားပြင်ဖို.သူတို.မှာ ခဲဖျက်မရှိဘူး ကိုကိုတို.ရေ…..
ပို.စ်အောက်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့ earth bar လေးအကြောင်း တကယ်ပဲမသိကြသလား ဗျာ…. လျှပ်စစ်ရုံးက ၀န်ထမ်းများကရော ဒါမျိုးတွေ အထက်လူကြီးမှားနေရင်တောင် အကြောင်းအကျိုး မပြောရဲလေသလား… ဒါမှမဟုတ် တာဝန်ရှိသူအားလုံးက ဘာမှကို မသိကြလေသလား မသိချင်ယောင်ဆောင်လေသလား…. earth bar တစ်ခုကို နှစ်သောင်း သုံးသောင်းလောက် ကျတာများ မတတ်နိုင်ကြဘူးလား… ဒါမှမဟုတ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ. ဒါလေးမတတ်လိုက်တာနဲ. ကြားပေါက် ၀င်ငွေ သန်းနဲ.ချီရနိုင်လို. မတပ်ပဲ အုထားလိုက်ကြတာလား…..
ဒါဆိုရင် အဲဒီ ဟာတွေ ဓာတ်တိုင်ရှေ.တည်တည့်မှာရှိတဲ့ အိမ်တိုင်း တစ်ယောက်နှစ်သောင်း ပေးပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တပ်ပေးရမလား…… ပြည်သူတွေကတော့ ဘေးကင်းဖို.ဆို တတ်နိုင်နိုင် မနိုင်နိုင် အောင့်အီးကြိုးစားပြီး တပ်ကြမယ်ထင်တာပဲ….. (မရှက် လုပ်ကြပစေပေါ့ဗျာ…)…ကျုပ်အိမ်ရှေ. လမ်းမှာ ဓာတ်တိုင် ၆တိုင်ရှိတယ် အန္တရာယ်ကင်းဖို. ၁၂၀၀၀၀ကျပ် လာတောင်းရင် ပေးပလိုက်မယ်… ကျုပ်သမီးလေးကို နို.မှုန်.ဗူးလျော့တိုက်မယ်… ဒါဆို အဲဒီ ပိုက်ဆံပေးနိုင်ပြီဗျာ….ကဲ..
ကျုပ်တို.ပြည်သူတွေရဲ. အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှံး နစ်နာနေတာ တွေရင် ကျုပ် သူများတွေလို ဘယ်သူ.ကိုမှ လက်ညှိုးထိုး အပစ်ပုံချတာမလုပ်ချင်တော့ဘူးဗျာ….. ကျုပ် သမ္မတပဲ ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်….
အင်း….. ကျုပ် သမ္မတဖြစ်လဲ ဒါတွေ သိမယ်မထင်ပါဘူးဗျာ……………. မပြောချင်တော့ပါဘူး….
ကိုယ့်အသက်ကို ကာကွယ်ဖို.တောင် ကျုပ်တို.မှ အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ဘ၀ တွေပါဗျာ…… မသေမချင်းတော့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ကိုယ်ထမင်းကိုယ်စား ဒုက္ခခံနေရအုံးမပေါ့…. သေခါမှသေရော….
နို့မှုန့် တော့ လျှော့မတိုက်ပါနဲ့
ဒို့ အစိုးရ က ပြစ်မထားပါဘူးဟ…။
အဲ…အဲ…မနေ့က နင်တို့နားမှာ ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျသေးတယ်နော်
လျှပ်စစ်ကြိုး ပြတ်ကျတဲ့ အတွက်
ဓါတ်လိုက် သေဆုံးမှုတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ပေါက် နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ဖို့
လိုနေပြီလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကပြော ကြား လိုက်ပါတယ်။
အများပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာနတွေ အနေနဲ့ အစဉ်အမြဲ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သလို
မွန်းမံပြင်ဆင်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
“ဒါဖြစ်မှ အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ ဒါမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်၊
မဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်ရမှာပေါ့ ဒီ ဓါတ်ကြိုးတွေ ဓါတ်ကြိုးဟောင်းတွေ
အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဓါတ်တိုင်ဟောင်းတွေ ဖြစ်နေတာနဲ့
ပတ်သက်လို့ ကျမတို့ လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့
မကြာခင်တုန်းက ဓါတ်လိုက် တာတွေ အန္တရာယ်ရှိတယ် ဒီဟာတွေကို လဲသင့်တယ် ကောင်းအောင်လည်း ပြုပြင်သင့်တယ်ဆိုတာကို
ပြော သွားတာ ရှိပါတယ်၊ ဓါတ်ကြိုးတွေ ဓါတ်တိုင်တွေ
တကယ့်ကို အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေပဲ လယ်လိုလုပ် ဒါတွေကို
လှစ်လျူရှု့ထားနိုင်လဲတော့ နားလည်ရတောင်မှ ခက်နေတယ်”
RFA ကပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အစီအစဉ်အတွက် မနေ့က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ
အခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သတင်းမီဒီယာသမားတွေအပေါ်
လတ်တလော အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာတော့
ဒါဟာ အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်းလျောက် လှမ်းပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ တာဝန်သိမှု ရှိရမယ်ဆိုတာ
ဒါမှန်ပါတယ် ဒါဟာလည်း လူတိုင်းက တာဝန်သိမှု ရှိရမှာပဲ
သို့သော်ငြားလည်း မတန်တဆပေါ့နော် မီဒီယာတွေကို
အရေးယူတာဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာ
ရေးသားပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာ သတင်းဖြန့်ချိပိုင်ခွင့်တွေကို
ချုပ်ချယ်ချင်လို့လား ဆိုတဲ့မေး ခွန်းတွေကတော့ မမေးလို့ မဖြစ်တော့ဘူး”
တဆက်တည်းမှာပဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့
စည်ကမ်းတွေအပေါ် သဘောထားနဲ့ အာဇာနည်နေ့ မှာ ပြုလုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ခေတ်က ကွန်ပျူတာခေတ် အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့ လူသိပိုများတာပေါ့ဗျာ…..
အခုအစိုးရကော….အခုEPCကော….. ဘာမှ သိပ်မကွားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်….
ရွှေအိမ်စည်ပြောသလို ဌာနအားလုံးပျက်စီး/မကောင်း ဆိုရင်တော့ သေချာပြီ။
အဲသည်ဌာနတွေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ ( အ…ရ) ဘဲညံ့လို့ဖြစ်မယ်။ ပြောင်းနိုင်အောင် ဝိုင်းလုပ် ဝိုင်းတွန်းကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ နှင့် လျှပ်စစ် မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ…။ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်သိပ်ကောင်းပါတယ် ။
နောက်တခုက အရင်တုန်းက မဟေသီမဂ္ဂဇင်း ကိုလည်းသတိရမိပါတယ် ။
့ 33KVကြိုးတွေအောက်မှာ မှာမြေကွက်လပ်ကြီးရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကြိုးနဲ့ကိုက်(၅၀)အတွင်းမှာအဆောက်အဦးမဆောက်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေကို
အရင်လူတွေကလိုက်နာခဲ့ကြပါတယ် ။အခုတော့ အဒီအောက်မှာ အိမ်တွေပြည့်နေပါပြီ။မြေလွတ်ကိုအကွက်ရိုက် မြေနေရာရောင်းတော့
ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျ ဓါတ်လိုက်သေတဲ့ သတင်းတွေဖတ်ရတော့ ကျနော်လည်းအိမ်ရှေ့ကတိုးချဲ့လိမ္မာနားလည်မှုမြေကွက်နေလူတွေအတွက်
စိုးရိမ်မိပြန်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးကိုယ်အိမ်ရှေ့က ဓါတ်ကြိုးမော့ကြည့်တော့
ကျွန်တော်တို့ နှင့် လျှပ်စစ် မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ…က
ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခေတ်က “ဖတ်ကြည့်”ဆိုတဲ့ဖတ်ညွှန်းလေးရဲ့ စကားငှားပြီး
လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတွေရယ် ၊ သက်ဆိုင်ရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ နှင့်လျှပ်စစ် မိုးပျံ မိုင်းဗုံးများ…
ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ ပဲလက်တို့ပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါရစေခင်ဗျား
အပေါ်က အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များမိန့်ကြားသွားလို့ အထူးတော့ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဗျို့ ။
အရပ်ထဲက လျှပ်စစ်ဗဟုသုတတွေကတော့ အတော်ကြီးကို လိုနေသေးတယ်မြင်မိတယ် ။
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော်အလုပ် လုပ်တဲ့ဆီက ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတချို့ဆိုရင်
ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ လျှပ်ကူးတယ် ။ဘယ်လိုအနေအထားမှာဓတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး ။
ကျောင်းဖတ်စာမှာ ပါရုံတော့ဖြင့် မလုံလောက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ် ။
အခုလောက်ထိပဲ ဓတ်လိုက်သေဆုံးနေတာ ကံကောင်းလွန်းလို့ နည်းပါသေးတယ်ပြောရမလိုပါဘဲဗ်ျု့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လျှပ်စစ်… လျှပ်စစ်အကြောင်းပေါ့ဗျာ…
ကျွန်တော် ဖက်တီးကက်ဆိုတဲ့ကောင်က အိမ်မှာ မီးချောင်းတပ်တာတောင်လူခေါ်တပ်ရတဲ့ဘ၀…
အလုပ်မှာ Electricity Quality ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုင်ရတော့မှ အိပ်မက်ကလန့်နိုးပြီး…
မနည်းကို လေ့လာရသမို့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ လက်တွန့်နေတာအမှန်ပဲ…
ဘာလို့များ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကို တရားစွဲလို့မရပါသလဲ…
ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်လို့ ဟစ်ကျွေးပြီး ပဒေသရာဇ်ခေတ်မကုန်သေးတဲ့ ငါတို့မြန်မာပြည်မှာ…
လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကို တရားစွဲလို့မရသ၍ သူတို့လဲဂရုစိုက်မှာမဟုတ်သေး…
လူ့အသက်တစ်ချောင်းကို ငွေကြေးလျော်ပေးရုံမျှဖြင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကျေပြီမှတ်သလို…
ခပ်ကြောင်ကြောင်သမ္မတမင်းအပါအ၀င် အားလုံးကို ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တရားစွဲခွင့်ရှိပြီဆိုပါမှ…
ဒီပြသနာတွေအေးလိမ့်မယ်… ငြိမ်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း…
.ကွန်မင့်တွေ စခွင်မှာ ထပ်ကုန်တယ်
.သက်တမ်းကြာ သက်တမ်းကုန် ဓါတ်ကြိုးတွေ
.မဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်ပါဘူး</strong) … တဲ့ …
.ဘယ်သူက အပရုဖ် လုပ်ပြီး
.တောင်ကိုရီးယားကတော့ ကူးတို့သင်္ဘောမှောက်တာ ကက်ပတိန်ကို လူသတ်မှု့နဲ့ ရုံးတင်တယ်…..
.တောင်ကိုရီးယားကို အတုယူတာမှမဟုတ်တာ …နော့ …
.မသကာ မြောက်ကိုရီးယားကို အတုယူတယ်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေး …
ဦးပါ အသဲကောင်းလို့ ပွဲတောင်းနေတာလား ဘယ်သူ့ကို လူသတ်မှုနဲ့ ရုံးတင်ချင်နေတာလဲ
ဒီအကြောင်းက ပြောရင်းနဲ့သာ သေသွားမယ် ဒုံရင်းက ဒုံရင်း…
မတူတဲ့အမြင် ၀င်လျှာရှည်ရရင် မီဒီယာက အဲ့ဒီလို သေဆုံးသူတွေရဲ့ ပုံကိုဖော်ပြတာ သင့်တော်ရဲ့လားမသိဘူး..
မလေးလေယာဉ်ပစ်ချခံရတဲ့ အထဲက အလောင်းတွေ ပွစာကျဲနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပဲရှိပြီး ပုံတွေ ဘယ်မီဒီယာကမှ တက်လာတာ မတွေ့ဘူးနော်…..
ဒီမှာက တခုခုကြောင့် သေပြီဟေ့ဆို ပုံတွေ ပလူပျံပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ကို ဆွပေးသလိုဖြစ်ဖြစ်နေကြလို့
ဖြစ်နိုင်ရင် တက္ကသိုလ်မှာ သတင်းမီဒီယာ ပညာ၊ ကျင့်ဝတ်ကို ဆိုက်ကိုနဲ့ တွဲပြီး မေဂျာတခုအနေနဲ့ ကောင်းကောင်းကြီး သင်ကြား မွေး ထုတ်ပေးစေချင်တာပါပဲ။
EPC ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် မီးတက်ပြင်ရင်း ဓာတ်လိုက်သေတယ်ဆိုတော့ ပြောစရာစကားက သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း ဘတ်ဂျက်လို့ ဝိုင်းအော်နေကြတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အရည်အချင်းကို ဦးစားပေးသင့်ပြီ ထင်တယ်။ အကပ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ အသုံးမကျတဲ့သူတွေကို ပေးနေရတဲ့ လစာတွေကို တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ခံစားခွင့်ပေးလိုက်ရင် တကယ်တော်တဲ့သူတွေပါ အစိုးရဌာနကို စိတ်ဝင်စားလာမယ် ထင်တယ်။
နောက်တစ်ဘူတာကတော့ ပညာရေး။ သင်ရသားပဲ၊ Electricity အကြောင်းတွေ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ လျှပ်ကာပစ္စည်း။ စာရွက်ပေါ်ချရေးပြီး စာမေးပွဲအောင်သွားရင် ခေါင်းထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး။ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ပြီး စနစ်မကောင်းတော့ သုညက တက်မလာဘူး။
အခုတော့ အရပ်ဆယ်မျက်နှာမေတ္တာပို့ကို ရွတ်နေတယ်။ အဘက်ဘက်က ဝင်လာမယ့် သေမင်းတွေကို မေတ္တာပို့ရတာ။ လမ်းလျှောက်ရင်း ကားတိုက်၊ ကားစီးရင် ကားချင်းတိုက်၊ အစားအသောက်တွေစားပြီး ကင်ဆာဖြစ်၊ အရည်အသွေးမမီတဲ့တိုက်ပြိုကျ၊ လမ်းသွားရင်း ဓာတ်ကြိုးပျက်၊ ရေတက်ပြီး မြွေထွက်။ ကျေးဇူးပါ မြန်မာပြည်။
၁၉-ဇူလိုင် နေ့ တုန်းက တစ်မနက်လုံး မီးမလာလို့ EPC ကို ဖုန်းဆက်ရတာ အခါပေါင်းမနည်းဘူး ဥသြဆွဲဘို့ အဆင့်သင့်လုပ်ထားတာ မီးကအဖျတ်ခံထားရ့တယ် လာမယ့်လာတော့ ၁၀ နာရီ ၃၉ မိနစ်မှာလာတယ် မှတ်မှတ်ရရပါပဲ ဖုန်းတွေသာ နားပူအောင်ဆက်ခဲ့တယ် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ မလာပေးပါဘူး ———————-
ဒါပေမယ့် EPC နဲ့က အကျိုးပေးတယ် ၂၁-၇-၂၀၁၄ မနက် ၁နာရီ ၃၀မိနစ်မှာ တောင်ဥက္ကလာ ၇ ရပ်ကွက်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာနေချိန် အသံကျယ်လောင်စွာနဲ့ မီးတွေပွင့်ပြီး ဓါတ်ကြိုးတစ်ကြိုး ပျက်ကျသွားပါတယ် လူတော်တော်များလည်း အိပ်နေရာမှ နိုးလာကြတယ် လူတွေကို အကုန်အော်ပြောရပါတယ် အပြင်မထွက်ဘို့ပေါ့ EPC ကိုလည်း ဖုန်းဆက်ရပါတယ် မီးမြန်မြန်ဖျတ်ပေးဘို့ ဒါပေမယ့် ပြောလိုက်တဲ့စကား အံ့သြရပါတယ် ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ အကြင်နာမဲ့ ၊ တာဝန်မဲ့ ဒိလိုပြောရတာလည်း မီးမဖျက်သေလို့ မြန်မြန်ဖျက်ဘို့ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ဆက်ရပါတယ် တာဝန်ကျသူဘယ်လိုပြောလိုက်သလဲဆိုတော့ ( မီးဖျက်ပေးမယ့်သူမလာသေး ဘူးတဲ့ ဒီအချိန်ကြီးလည်းလမ်းထဲ ဘယ်သူမှ မလာနိုင်ပါဘူးတဲ့ ) တစ်ကယ်လို့ ဒီလိုအချိန်မှာ ည အချိန် အလုပ်ဆင်းရတဲ့ သူတွေ ပြန်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သူတို့ ဘယ်လို တာဝန်ယူပေးနိုင်မလဲ ကျွန်မတို့ တစ်လမ်းလုံး မီးမပျက်မချင်းကို အော်ပြောနေရပါတယ် ဒီလမ်းထဲကို ဘယ်သူမှ မလာဘို့ လမ်းပေါ် ဘယ်သူမှ မသွားဘို ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုနေကြဘို့ မိုးသံနဲ့အတူ အော်ပြောနေရပါတယ် ဒါကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံလား—–?
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မတို့ ကိုယ့် အသက် ကို တာဝန်ယူုကြရပါမယ် ဘယ်သူမှ တာဝန်မယူ ဂရုလည်း မစိုက်ကြပါဘူး ကိုယ်ဖြစ်ကိုခံပါပဲ
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားဆို သူတို့ နိုင်ငံမှာ အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန် မလေးရှားလေယာဉ် ပစ်ချခံရတယ် သတင်းကြားတော့ အစည်းအဝေးကို ခဏရပ်ပြီး ပြောလိုက်တယ် “ငါ့ပြည်သူတွေပါလား” တဲ့ မပါဘူးဆိုတဲ့ အသံကြားမှ ဒါဆို အစည်းအဝေးဆက်လုပ်မယ် ပြီးမှ ဒီအကြောင်းဆက်ပြောမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ် ဘယ်လောက် နိုင်ငံအကြီးအကဲ စိတ်ဓါတ်ရှိသလဲ ဘယ်လောက် သူ့ပြည်သူတွေကို အလေးထား ဂရူစိုက်ပြီး ချစ်ခင် သလဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဓါတ်ကြိုးပျက်ကျပြီးအသက်ဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ လက်ချိုးမရေနိုင်တော့ပါဘူး ——————–
မိုးရွာလို့လေတိုက်လို့ ဓါတ်ကြိုးတွေပျက်ကျမှ သစ်ပင်တွေကိုလိုက်ခုတ် ကားလမ်းတွေကိုပိတ်လို့…
ကားတွေကိုထင်တိုင်း သွင်းခိုင်းပြီးမှ လမ်းတွေကိုမိုးတွင်းမှာလည်းခင်းးးးးး
မိုးတွေကြီးလို့ ရေတွေလျှံတော့မှ မြောင်းတွေကိုဖေါ်ရကောင်းမှန်းသိ…
အခုဆို ပိုတောင်ဆိုးနေပြီ။ ဘုရင့်နောင်တစ်ကြောမှာ လမ်းတွေ ပြင်လိုက်တော့ ကုန်းတွေမြင့်လာတယ်။ ကွန်တင်နာကားတွေနဲ့ မလွတ်တော့ ဓာတ်ကြိုးတွေက အမြဲပြတ်ကျတယ်။ မိုးတွင်းဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်။
လမ်းသွားရင် ကားကြောကျပ်လို့ ကားရှောင်ရတာနဲ့ ဘယ်ကနေ ဘယ်ကြိုးက ပြုတ်ကျလာလည်း ကြည့်ရနဲ့ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေဘူး။ ဓာတ်ကြိုးတွေကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီး မြင့်ပေးရမှာတွေလည်း ခုထိ လာမလုပ်သေးဘူး။